Socdaalka Xalaal ee Sydney - Makhaayadaha - Masaajiddada - Hoteelada
Marka loo eego tirakoobkii la sameeyay sanadkii 2016, dadka muslimiinta waxay gaarayaan 265,000 oo qof halka 42% dhamaan muslimiinta Australia ay ku nool yihiin Greater Sydney.
Sydney waa Magaalada Harbor. Waa magaalada ugu weyn, ugu da'da weyn uguna caansan uguna caansan Australia oo leh sumcad xamaasad leh inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka adduunka ugu quruxda badan uguna noolaanshaha badan. Ku xoqidda taariikhda, dabeecadda, dhaqanka, farshaxanka, moodada, cunnada iyo naqshadeynta, waxaa la dhigay meel u dhow mayl-xeebeedka badda iyo xeebta bacaadka ah ee bacaadka ah. Magaalada sidoo kale waxay ku taal Sydney Opera House iyo Buundada Harbor Sydney, oo ah labada dhisme ee ugu caansan meeraha.
Sydney waa magaalo weyn oo caalami ah iyo xarun maaliyadeed oo muhiim ah oo ku taal gobolka Aasiya-Pacific. Magaalada waxaa ku hareereysan dabeecadda iyo jardiinooyinka qaranka, kuwaas oo ku fidsan agagaarka xaafadaha iyo xaqa xeebta dekedda.
Sydney waxay leedahay xudun magaalo oo kooban oo ku wareegsan hareeraha xaafadaha, sameynta aag balaaran. Bartamaha magaalada, Bartamaha Sydney wuxuu u egyahay qaab eg gacan bidix oo baabac gacan taag ah: ciribta suulka sida City South, suulka degmada Darling Harbor, farta koowaad sida Dhagaxyada, calaacasha oo leh faraha labaad iyo saddexaad sida Xarunta Magaalada iyo inta kale sida Bariga Magaalada.
Shanta degmo ee Central Sydney
Hoy u ah Degmada Ganacsiga Bartamaha ee mashquulka ah (CBD), Xarunta dawladda iyo maaliyadda laakiin sidoo kale hoy u ah soojiidasho badan oo caan ah (oo ay ku jiraan Opera House iyo Royal Botanic Gardens), maqaayado fiican iyo dukaamaysiga. Ka qaado doomaha laga soo bilaabo Quay Circular ilaa Jasiiradaha Harbor ee Sydney.
Kaliya dhanka galbeed ee Wareega Wareega. Mar waa tuuladii gumeysiga ee Sydney, Dhagaxyadu hadda waa aag cosmopolitan leh taariikh, aragtiyo iyo dukaamaysi. Waa albaab laga tago Buundada caanka ah ee Sydney Harbor.
Meel madadaalo iyo madadaalo ballaaran isla markiiba galbeedka galbeedka Magaalada. Safar subax hore u aad suuqyada kalluunka oo dabagal adigoo sahaminaya makhaayadaha, jidadka lagu raaco, aquariums-ka, duurjoogta iyo matxafyada ku xeeran Cockle Bay. Kadib raadso baararka badda ama ku dhufo The Star casino.
Haymarket, Chinatown iyo Central Station waxay hoy u yihiin suuqyo, kafateeriyada, dhaqanka Shiinaha iyo cunnooyinka oo ay weheliso hoy iyo dukaan ka raqiisan.
Kings Cross, Darlinghurst, Surry Hills, Woolloomooloo iyo Moore Park. Nolol mashquul mashquul ah, dukaamo kafee, mood iyo madadaalo maalintii.
Greater Sydney, xaafadaha fidsan ee ku yaal aagga weyn ee magaalo -weynta ee ku xeeran Bartamaha Sydney waxay ku fidday ilaa 100 km galbeed ka xigta Xarunta Magaalada. Qofka socotada ah ee booqanaya agagaarka agagaarkiisa wuxuu ka heli doonaa xeebo aad u ciriiri badan, jardiinooyin, dukaameysi jaban, Xarumo ganacsi, xaflado dhaqameed iyo dhagaxyo qarsoon.
Degmooyinka waaweyn ee Sydney
Inta udhaxeysa Bartamaha Sydney iyo badda, Xaafadaha Bariga waxaa kujira kuwa adduunka caan ka ah Bondi Beach, Coogee iyo xeebaha kale ee magaalada kuwaas oo ah kaararka sawirada adag ee loogu talagalay booqdayaasha iyo dadka degan Magaalada inta lagu jiro xagaaga.
Gegada diyaaradaha & Botany Bay
Kaliya koonfurta bartamaha Sydney. Dukaameysiga gorgortanka iyo bayside wuxuu ku socdaa meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Sydney.
Magaalada Sydney markii hore asal ahaan, galbeedka galbeedka Central Sydney hada waa Bohemian waana xarun cuno jaban, dukaameysi iyo dhaqan magaalada dhexdeeda ah. Waxa kale oo ku jira Sydney Olympic Park, oo ah guriga Sydney 2000 Olympic Games iyo White Bay Cruise Terminal.
Xeebta Waqooyiga Hoose
Buundada Harbor dusheeda waxaa ku yaal goobo caleemo-qoyan oo u fidsan xagga woqooyi. Xeebta Waqooyiga Hoose waxay sidoo kale leedahay goobo ganacsi iyo tafaariiqeed oo waaweyn Waqooyiga Sydney iyo Chatswood, goobo badan oo dukaamo yaryar oo dukaamo ah, jardiinooyin badan, jardiinooyin iyo Taronga Zoo oo caan ku ah Sydney.
Waxay ka kooban tahay jardiinooyin qurxoon oo fiirinaya Lane Cove iyo Parramatta Webiyada, cuntada weyn ee Bariga Aasiya ee Eastwood iyo xarun farsamo sare oo loo yaqaan 'Silicon Valley' Australia.
Sydney Waqooyiga (Xeebaha Waqooyiga, Xeebta Waqooyiga Sare, Hills & Hawkesbury)
Waxay bixisaa dib u dhigista Xeebaha Waqooyiga, laga bilaabo Manly u fidinaya Waqooyiga dhanka xeebta ilaa Palm Beach. Waxaa ka mid ah meelaha la deggan yahay ee caleenta leh, jardiinooyinka qaranka iyo wabiyada Xeebta Sare ee Woqooyi iyo sidoo kale Degmada Hills oo aad u diimeed iyo baadiyaha miyiga & Galston ee Hills & Hawkesbury
Sydney Koonfurta (Koonfur Galbeed, Sutherland Shire, Macarthur)
Koonfur Galbeed waxay leedahay qaar ka mid ah jaaliyadaha soogalootiga ah ee ugu firfircoon magaalada Sydney oo leh degaano qowmiyadeed oo ku sii kordhaya qaybo kala duwan oo ka tirsan degmada. St George & Sutherland Shire waxay ku raaxaystaan ​​marin biyoodka wabiga St Georges, Botany Bay iyo Port Hacking waxayna hoy u tahay Cronulla iyo Meesha uu Ka degay Kabtan Cook. Macarthur wuxuu ka kooban yahay aagagga Campbelltown iyo Camden.
Sydney Galbeed (Parramatta, Penrith Valley, Magaalada Hawkesbury)
Isagoo ka soo baxaya Parramatta, Sydney "labaad" ee CBD oo leh taariikh fara badan iyo wax soo iibsi iyada oo loo marayo Dooxada Penrith (Galbeedka Galbeed) Buuraha Blue.
Giraffes ee Taronga Zoo
Sydney waa degitaankii ugu da'da weynaa ee reer Yurub ee Australiya, oo loo aasaasay inuu yahay gumeysi ciqaabeed oo Ingiriis ah 26 Janaayo 1788 by Arthur Phillip. Maalintan ayaa hadda loo dabaaldegaa sida Maalinta Australia si loo xuso aasaaska qaran cusub, in kasta oo sidoo kale dad badani tixgeliyaan sida Maalinta Duulaanka taas oo calaamad u ahayd bilowgii qoondaynta Ingiriiska ee dhulka Aborijiniska. Dejinta waxaa loogu magac daray "Sydney" Thomas Townshend, 1aad Viscount Sydney, oo xilligaas ahaa Wasiirka Arimaha Gudaha ee Ingiriiska.
Sydney waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan adduunka, iyadoo seddex meelood meel dadka ku nool ay ku dhasheen dibedda. Degitaankii reer Yurub wuxuu si deg deg ah uga barakiciyay dadka Aborijiniska ah ee aagga Sydney guumaystayaal inta badan ka yimid England, Ireland iyo Scotland. Goobta dahabka ee Australiya ayaa soo jiidatay soogalooti badan, oo ay ku jiraan tiro aad u tiro badan oo Shiineys ah, iyadoo lixdii qof ee Australiyaanka ah midkoodna asalkiisu yahay dambiile sidoo kale leh isir Shiino ah. Horraantii qarnigii 20-aad, Sydney waxay sii waday soo-jiidashada soo-galootiga - badankoodna waxay ka yimaadeen Boqortooyada Midowday (UK) iyo Irland, iyadoo Siyaasadda Cad ee Australia (Australia) laga hor istaagayo dadka aan Yurubta ahayn (iyo xitaa Reer Yurubta Koonfureed) inay degaan. Qaababka soogalootiga ee Australia, sidaa darteed, tii Sydney, wax weyn ayey iska beddeleen Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib, markii muhaajiriintu bilaabeen inay ka yimaadaan waddamo kala duwan sida Talyaaniga, Griiga, Jarmalka, Holland, Shiinaha, New Zealand, Hindiya, Filibiin, Poland, Lubnaan, Ciraaq, Vietnam, Thailand, Koonfur Afrika iyo Jasiiradaha Baasifigga. Dhaqanka, cuntada iyo aragtida guud ee Sydney waxay sifiican uga tarjumaysaa tabarucaadyadan inta badan hay'adaha Anglo-Celtic iyo aasaaska bulshada.
Sydney waxaa laga aqoonsan yahay adduunka oo dhan bulshada firfircoon ee Gay. Sannad kasta, Sydney Gay iyo Lesbian Mardi Gras ayaa loo dabaaldegaa dhammaadka usbuuca koowaad ee bisha Maarso, iyagoo ka soo jiidaya dadka Australia oo dhan iyo adduunka dabaaldegyada.
Sydney waxay ahayd Xarunta dareenka adduunka bishii Sebtember 2000 markii ay magaaladu martigelisay Ciyaaraha Olombikada Xagaaga - oo uu Guddoomiyaha IOC ku dhawaaqay xafladdii xiritaanka inuu ahaa “cayaarihii ugu fiicnaa abid”. Ciyaaraha Olombikada ayaa arkay dhisme iyo dib -u -habayn weyn oo lagu qabtay Sydney, iyada oo lagu meeleeyay inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee adduunka qarnigii 21 -aad.
Shaxda SydneyClimate (sharaxaad)
Iskucelcelis max. iyo min. heerkulka ° C
Roobab + Wadar baraf ah oo mm ah
Iskucelcelis max. iyo min. heerkulka ° F
Roobab + Wadarta guud ee barafka inji
Sydney waxay ku raaxeysataa in ka badan 300 maalmood oo qorax leh sanad walba, waana meel loo socdo sanad-dhan. Ka fogow maalmaha ugu kulul firfircoonida dibadda, iskana ilaali kuwa ugu fiican haddii aad qorsheyneyso fasax xeebeed.
Summer (Diseembar ilaa Febraayo) waa waqtiga ugu wanaagsan ee lagu raaxeysto qaab nololeedka bannaanka ee xeebta Sydney. Heerkulku badanaa wuxuu gaaraa illaa 26 ° C (qiyaastii 79 ° F) laakiin aad buu u kululaan karaa, siiba dhinaca gudaha iyo galbeedka, heerkulkuna kor buu u kacayaa in ka badan 40 ° C (104 ° F) dhawr maalmood xagaa kasta. Maalmaha xagaaga waxay noqon karaan kuwo qoyan, mararka qaarkoodna leh dabaylo qalalan, laakiin maalmaha kulul badanaa waxay ku dhammaadaan "koonfur-buster", wejiga hore ee qabow oo ka imanaya xagga koonfurta, keenaya hoos u dhac heer sare ah oo heer kul ah, iyo sidoo kale roob iyo onkod. Saacado gudahood, duufaantu way dhaafi kartaa fiidkiina wuu sii socdaa. Maalmo kulul, dabeyl leh ayaa abuuri kara halista dabka kaymaha, iyo maalmaha khatarta ba'an lagu hayo jardiinooyinka qaranka iyo jidadka socodka ayaa la xidhi karaa. Mararka qaarkood nidaamyada cadaadiska hoose ayaa ka soo dhaca kuleylaha, iyagoo siiya xilliyo cimilo aan degganeyn. Uma baahnid inaad xirxirto wax ka badan funaanadaha si aad u booqato Sydney xagaaga, laakiin xusuusnow koofiyaddaada iyo muraayadaha indhaha.
Dayrta (Maarso ilaa Maajo) wali waa kuleyl habeeno qafiif ah. Waxaa jiri kara maalmo wanaagsan xeebta bisha Maarso, laakiin kuma xisaabtami kartid. Waa wakhti ku habboon booqashada meelaha soojiidashada leh, aadaya xadiiqadda xayawaanka, soo qabashada doomaha ku xeeran dekedda oo aan xagaaga dad badani joogin. Waxaad u baahan kartaa diiran diiran fiidkii, gaar ahaan Maajo.
Winter (Juun ilaa Ogast) waa qabow, ma aha qabow. Celceliska heerkulka ugu sarreeya ee bisha Luulyo waa 17 ° C, heer kulka maalintiina si dhif ah ayuu uga hooseeyaa 14 ° C, laakiin heerkulka xilliyada habeenkii wuxuu ku dhici karaa inuu ka hooseeyo 10 ° C. Roobabka badankood waxay da'ayaan dhowr nidaam oo cadaadis hoose oo ka baxsan xeebta, taas oo badanaa keenta laba ama saddex toddobaad roobab xilliga qaboobaha. Ku Bondi Icebergs waxay ku jiri doonaan badweynta iyagoo samaynaya safarkooda subaxnimo, laakiin inta badan Sydney waxay si fiican uga fogaan doonaan xeebta. Wax baraf ah kama da'o Sydney, iyo inaad ku talajirto inaad waqti dheer ku bixisid dibedda, waxaad caadi ahaan la imaan kartaa dusha diiran oo keliya. Sydney waa magaalo sanad-wareeg ah, oo kaliya meelaha-baarkinka biyaha laga baxo ayaa u dhow jiilaalka. Haddii xeebtu aysan ahayn goobtaada, oo aadan jeclayn kuleylka, jiilaalka ayaa laga yaabaa inuu noqdo waqtigaaga inaad soo booqato.
Spring (Sebtember ilaa Nofeembar). Maalmaha guga waxay ku fiican yihiin sahaminta soojiidashada Sydney, socodka socodka bushkuleeti, baaskiil wadida, iyo banaanka. Xeebaha guud ahaan waa la kormeeraa laga bilaabo dhammaadka Oktoobar, iyo Sydneysiders waxay bilaabaan inay ku soo qulqulaan xeebaha Nofeembar.
Xaafadaha Galbeed ee Sydney, oo ka durugsan xeebta, waxay u muuqdaan kuwo kulul maalinnimada, qabow inta lagu jiro habeenkii oo aan helin roobab badan. Waxay tebiyaan neecawda badda galabtii iyo saameynta kululaynta habeenki ee badweynta.
Inta badan dhismayaasha dadweynaha sida Xarumaha wax iibsiga waxaa laga maamulaa cimilada gudaha. Sydney waxay xiise u leedahay cuntada alfresco oo sanadka oo dhan ah, halkaas oo aad ka heli karto adiga oo ka cunaynaya badhtamaha jiilaalka dibedda oo leh kuleyliyaha miisas yar. Ku dhawaad ​​90% gaadiidka dadweynaha ayaa leh kululaynta iyo qaboojinta. 10% kale ee xakamaynta cimilada waxay ka kooban tahay daaqad furan. Biyo qaado maalin kulul.
Cimilada Sydney iyo macluumaadka cimilada waxaa laga heli karaa khadka tooska ah ee Xafiiska saadaasha hawada ee Australia.
Dhismaha boqoradda Victoria (QVB) waa tusaale aad ufiican oo ku saabsan saameynta gumeystaha Ingriiska ee dhismaha Australia
Cirka sare ee Sydney waa mid balaaran oo si weyn loo aqoonsan karo. Sydney sidoo kale waxay leedahay noocyo kaladuwan oo casri ah iyo qaab dhismeed duug ah. Waxay u dhexeeyaan dhismooyinka fudud ee Francis Greenway ee Joorjiyaanka ah ilaa Jorn Utzon 'Expressionist Sydney Opera House'. Sydney sidoo kale waxay leedahay dhismayaal badan oo Fiktooriya ah, sida Hall Town Hall iyo Dhismaha Queen Victoria. Dhismooyinka ugu muhiinsan qaab dhismeedka muhiimka ah waxaa ka mid ah Sydney Opera House iyo Buundada Sydney Harbor. Dhismayaasha dhaadheer ee Sydney sidoo kale waa kuwo waaweyn oo casri ah. Dhismaha ugu dheer ayaa ah Dhismaha Sydney oo dhererkiisu yahay 300-m, oo la arkay inuu si cad kor ugu sii kacayo qeybaha kale ee Sydney.
Waxa kale oo jira jeebab guryo dhisme ahaan muhiim u ah oo ku yaal hareeraha hareeraha Sydney. Qeybta-bari ee Paddington waxaa loo yaqaan guryo dabaq ah, halka dhowr xaafadood oo galbeedka-galbeed kuyaal ay ku jiraan jidad ay kuxiran yihiin waxa loogu yeero guryo federaal ah (oo la dhisay xilligii isutaggii Australiya sanadkii 1901). Tusaalaha sifiican loo xafiday ee guryaha fadaraalka ee Sydney wuxuu kuyaala xaafada Inner West ee magaalada Burwood. Wadada loo yaqaan 'Appian Way' waa waddo wareeg ah oo laga dhisay hareeraha tennis-ka tennis-ka oo lagu buuxiyo guriga teendhada. Guryaha waawayn dhammaantood waa qaab dhismeed gaar ah waxayna ku dhisan yihiin dhul ballaadhan oo leh geedo duug ah iyo beero qurux badan. Meel ka durugsan dhinaca hoose ee Waqooyiga Shore, Castlecrag waa xaafad u gaar ah, oo uu qorsheeyey naqshadeeyaha Walter Burley Griffin sannadihii 1930-naadkii.
Wadada Sydney iyo Harbor Bridge habeenkii laga bilaabo Kirribilli.
Socdaalka socodka ee Sydney - inta badan agagaarka Central Sydney. Fadlan eeg liis gaar ah si aad u hesho macluumaad faahfaahsan.
Hal toddobaad magaalada Sydney - fikradaha qaarkood oo ku saabsan sida toddobaad loogu qaato gudaha iyo hareeraha magaalada Sydney, iyadoo la baarayo aagag kala duwan
Madaarka Sydney waa xarun weyn ee diyaaradda qaran ee Australia, Qantas
Maqaalka ugu muhiimsan: Madaarka diyaaradaha ee Sydney
Madaarka Caalamiga ah ee Sydney Kingsford Smith () waa madaarka ugu mashquulka badan Australia iyo albaabka ugu weyn Australia. Waxay 9 km u jirtaa Xarunta Magaalada ee Koonfurta Sydney dhanka xeebta waqooyi ee Botany Bay. Madaarka Sydney waa madaarka ganacsi ee ugu da'da weyn ee si joogto ah u shaqeeya meel kasta oo adduunka ah. Waxaa jira duulimaadyo toos ah oo ku socda Sydney dhammaan qaaradaha kale ee la deggan yahay. Siyaabaha ugu muhiimsan ee lagu soo galo magaalada waa tareen (qiyaastii $ 17 hal mar ah oo ku yaal gegida Airport & East Hills), ama tagsi ($ 40-50 ilaa Dhagaxyada).
Waa ku dhowaad sagaal saacadood in laga kaxeeyo Melbourne iyo ilaa laba iyo toban laga bilaabo Brisbane. Haddii aadan u baran inaad wadid masaafo dheer waddooyinka caajiska ah, waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay inaad ku kala goyso safarka laba maalmood ama ka badan. Adelaide waa qiyaastii shan iyo toban saacadood oo baabuur wadis ah sida caadiga ah si loogu oggolaado saddex maalmood wadista Adelaide. Wadada weyn ee Hume ee udhaxeysa Sydney iyo Melbourne waa waddo tayo sare leh oo laba waddo leh. Isla sidaas looma dhihi karo wadista Brisbane. In kasta oo ay leedahay qaybo tayo sare leh, haddana waxay leedahay qaybo cidhiidhi ah oo aad u cidhiidhi ah, waxay wadataa xaddiga taraafikada oo sarreeya, oo waxay leedahay joogsiyo badan oo ka yimaada waddooyinka.
Melbourne - Sydney = 862 km iyadoo la marayo Albury-Wodonga (Hume Highway).
Adelaide - Sydney = 1422 km iyada oo loo marayo Mildura ama 1659 km iyada oo loo marayo Broken Hill (National Highway 32).
Brisbane - Sydney = 938 km dhanka xeebta (Wadada Baasifiga) ama 961 km la mariyo Armidale (Wadada New England Highway). Wadada weyn ee loo yaqaan 'Pacific Highway' waxay sii martaa magaalooyin badan, soojiidasho, waxayna leedahay tas-hiilaad badan marka la barbardhigo Wadada New England Highway, laakiin waxay ciriiri ka dhigi kartaa inay u gudubto magaalooyinka agagaarka xilliyada fasaxa. In kasta oo waddada weyn ee loo maro Baasifigga ay raacdo xeebta, ma arki doontid badda marka laga reebo xoogaa bidhaamaysa kooban. Waxaa jira wabiyaal dhan xeebta, afafka wabiguna way kala ballaaran yihiin, taasoo keenaysa buundooyinka wadada iyo magaalooyinku in yar oo gudaha ah. Hadaad waqti haysato, raadso leexashada dariiqa dalxiiska si aad u aragto meelo badan oo ka mid ah Xeebta-Waqooyiga-Waqooyiga iyo Waqooyiga Webiyada ee hoos u dhaca (xeebuhu way ka dad badnaan doonaan Sydney!)
Haddii aad kireysaneysid gaari, hubi gunnooyinka masaafada maalinlaha ah iyo lacag kasta oo hal-dhinac ah oo laga yaabo in lagu dabaqo marka aad ka kaxeyso meelaha aan caanka ahayn ee magaalooyinka waaweyn. Gawaarida waxaa laga kireyn karaa garoonka diyaaradaha iyo meelo kale shirkadaha waaweyn ee kirada, ama shirkadaha yar yar, ee kufiican meesha kufiican.
Wadaagida rakaabka waa lala qabanqaabin karaa dadka safarka ah. Waxaad ka heli kartaa waxyaabo badan oo carpool ah oo laga helo internetka ama ogeysiisyada hoteelada, iwm. Digniinta caadiga ah ayaa khuseysa.
Waxaa jira lacago khidmado u ah inta badan waddooyinka waaweyn ee soo gala magaalada Sydney, laakiin ma jiraan albaabbo lacag lagu raaco oo aad ku bixin karto. Hoos ka eeg qaybta “Tolls”.
Shirkadaha tababarayaashu waxay ka hawlgalaan Sydney dhammaan caasimadaha, iyo Xarumo badan oo gobolka New South Wales ah. Terminalka tababbarka Sydney wuxuu ku dhow yahay saldhigga tareenka ee Sydney Central ee Koonfurta Magaalada. Raac calaamadaha.
Safarka Coach in Sydney sida caadiga ah waa ka dhakhso badan, ka jaban oo ka badan safarka tareenka. Xirmooyinka khaaska ah ee khadka tooska ah iyo horay loo sii qaado ayaa badanaa la heli karaa.
Tababbarayaasha Greyhound waxay leeyihiin shabakadda basaska ugu ballaaran Australia, laakiin waxaa jira kuwa kale oo yar.
Priors Scenic Express waxay ka shaqeysaa adeeg tababara oo ka socda saldhigyada Parramatta, Liverpool iyo Campbelltown ilaa Koonfurta Highlands, Kangaroo Valley iyo South Coast
Saldhiga Dhexe ee Sydney
Qaadashada tareennada masaafada fog laga raaco magaalo kasta oo kale oo weyn oo Australia ah ilaa Sydney maahan ikhtiyaar caan ah, iyadoo duulimaadka ama wadista gawaarida badanaa laga doorbido inay ahaadaan kuwa dhakhso badan oo ka jaban. Si kastaba ha noqotee Australia waxay leedahay shaqeyn, inkasta oo gaabis ah, shabakad laga yaabo inay mudan tahay in la tixgeliyo haddii aadan ku degdegin ama aad rabto inaad tagto meelaha fog fog.
Adeegga tareenka masaafada dheer ee New South Wales NSW Tareen Xiriir Gobol, (13 22 32 gudaha Australiya) waxay u socotaa ugu yaraan adeeg maalinle ah ilaa Sydney laga bilaabo Brisbane, Melbourne, Canberra iyo gobollo badan oo New South Wales ah oo ay kujiraan Mid-North Coast, New England, Central West iyo Southern Highlands. Waxay sidoo kale u adeegtaa Broken Hill toddobaadle. Waqtiga laga safrayo Melbourne iyo Brisbane waa qiyaastii 12 saacadood. Qiimaha udhaxeeya $ 50 iyo $ 120 ee kuraasta fasalka caadiga ah iyo tikidhada waa in horay looga iibsadaa khadka tooska ah ama telefoonka. Tigidhada waxaa laga heli karaa oo keliya xulasho xaddidan oo saldhigyo ah waqtiyada furitaankuna waa la xaddidi karaa. Tareenada masaafada dheer ee udhaxeeya Melbourne iyo Sydney, iyo Brisbane iyo Sydney waxay noqon karaan culeys yar (laakiin daruuri maahan dhaqso) badelida wadista. Badanaa waa suurtagal in la helo qiimo dhimis duulimaad qiyaastii la mid ah ama ka raqiisan qiimaha tareenka dadka waaweyn.
The Baasifiga Hindiya (13 21 47 gudaha Australia ama +61 8 8213 4592 caalami ah) adeega tareenka wuxuu kabilaabaa Perth ilaa Sydney ayadoo loo marayo Adelaide iyo Broken Hill. Qiimaha dadka waaweyn laga bilaabo Perth wuxuu ka bilaabmaa qiyaastii $ 2000 pp qolka hurdada. Carruurtu waxay helayaan 20% marka ay la safrayaan qof weyn. Tareenku wuxuu ka baxa Perth Arbacada wuxuuna yimaadaa Sydney Sabtida. Qiimayaashaas ayaa aad uga sarreeya qiimaha tikidhada lagu celiyo magaalada Perth, safarkan ayaa runtii loogu talagalay dadka jecel safarka tareenka ee doonaya inay arkaan gudaha Australia. Ka eeg Guud ahaan Australia tareen wixii macluumaad dheeraad ah.
Dhamaan masaafada dheer (NSW Trainlink iyo Tareenka Weyn ee Koonfurta) waxay tareenka u aadaan Sydney waxay ku egtahay Sydney Xarunta Dhexe koonfurta aagga CBD. Socdaalayaashu waxay u wareejin karaan Tareennada Sydney, adeegga tareenka fudud ee loo maro Darling Harbor, basaska magaalada, iyo sidoo kale tagaasida. Sidoo kale way fududahay in loo wareejiyo tareenada kale ee fog iyo tababarayaasha. Waxaa jira baarkinka mitir gaagaaban si aad ula kulanto tareenada dusha sare. Waxaa jira ATM-yada, xulasho yar oo ah meelaha cuntada laga cabo, kafateeriyada oo furan ilaa goor dambe, iyo soo bandhigida dhaxalka tareenka ee bulshada iyo buugaagta lagu iibiyo gegada.
The NSW Trainlink Intercity waxay socodsiiyaan adeegyo badanaa soo noqnoqda maalintii oo dhan meelaha dhow ee gobolka: Newcastle iyagoo sii maraya Central Coast, Moss Vale oo sii maraya Koonfurta Highlands, Nowra iyadoo la marayo Illawarra iyo Lithgow iyada oo loo marayo Blue Mountains. Adeegyada xaddidan waxay ka shaqeeyaan Goulburn iyo Bathurst. Tareenada magaalooyinka uma baahna boos celin.
Markab dalxiis oo ku socdaalaya Buundada Harbor
Maraakiibta Cruise-ka ee booqda Sydney guud ahaan waxay ku xirtaan Terminal-ka rakaabka Dibadda ee Wareegga Wareega ama Terminalka White Bay Cruise.
Quay Wareegtada waa meel aad u qurux badan oo lagu soo xirto, isla markaana ku ag yaal Buundada Harbor iyo ka soo horjeedka Sydney Cove oo ka timaadda Opera House, waxaadna ka bixi kartaa markabka oo aad magaalada ugu tagtaa The Rocks ka dibna aad u tagtaa Xarunta Magaalada.
Caddaan Bay Gudaha Galbeedka ma sahlana in lagu socdo meel kasta. Maalmaha dalxiiska waxaa jira doon u shaqeysa Darling Harbor, iyo sidoo kale tagaasida iyo adeegyada wareejinta ee ay abaabulaan shirkadaha dalxiiska (badanaa magaalada iyo garoonka diyaaradaha). Maraakiibta ka raaca White Bay waxay leeyihiin shiraac qurux badan, marka hore waxay marayaan buundada Harbor ka dibna waxay marayaan guriga Opera.
Waqtiyada ugu sarreysa maraakiibta qaar waxay ku xirnaan karaan Taronga Zoo (Athol Buoy, galbeedka Bradleys Head). Hadday tan kugu dhacdo, waxaa lagugu wareejinayaa boosteejada rakaabka ee Wareegta Quay si loo dhammaystiro socdaalka, iwm.
Kalandarka markab dalxiis ee Sydney
Nidaamka gaadiidka dadweynaha wuxuu ka kooban yahay tareeno, basas, doomo iyo tareen fudud wuxuuna ku gaarsiin karaa meel kasta oo magaalada ka mid ah iyo weliba inta badan gobollada dibedda maalin kasta oo sanadka ah. Gaadiidka Dadweynaha ee Sydney way adkaan kartaa, xitaa marka aad ku safraysid CBD iyo xaafadaha gudaha. Masaafadaha gaagaaban ee Bartamaha Magaalada waxay ku dheerayn kartaa socodka marka loo raaco gaadiidka dadweynaha.
Codsiyada taleefannada casriga ah sida Khariidadaha Google, TripView, Moovit iyo Arrivo Sydney waxay u isticmaalaan macluumaadka tooska ah ee gaadiidka dhammaan noocyada gaadiidka waxtar weyn ayey u leeyihiin safarada gaadiidka dadweynaha ee gobolka Sydney dhexdiisa. Tripview ayaa ugu fiican wadada la yaqaan ee aad rabto waqtiyada ugu dambeeya. Moovit ama Khariidadaha Google ayaa ugufiican hadaadan garanaynin wadada, waxayna ubaahanyihiin waqtiga iyo macluumaadka joogsi-joojinta. Barnaamijyadan waxaa laga heli karaa macruufka iyo Android.
Gaadiid Infoline. 24 saacadood. Macluumaad ku saabsan qiimayaasha iyo qorshaynta marinnada dhammaan gaadiidka dadweynaha ee magaalada Sydney. Waxaa laga heli karaa khadka tooska ah iyo telefoonka.
Goobaha Gaadiidka, Wareeg Wareeg ah (cnr of Loftus & Alfred Sts), Wynyard oo hoos timaadda Wynyard Park. Macluumaadka khidmadaha iyo qorshaynta jidadka ee dhammaan gaadiidka dadweynaha ee Sydney, dhammaan iibinta tikidhada, waxay aqbalaan kaararka deynta.
Akhristaha kaarka Opal
Nidaamka tikidhada tikidhada gaadiidka ee Sydney ayaa loo yaqaan Opal. Nidaamku wuxuu daboolayaa dhammaan tareenka, basaska, doomaha dadweynaha iyo adeegyada tareenka fudud ee Sydney, Newcastle, Wollongong iyo gobollada ku xeeran.
Waxaad ka heli kartaa Opal smartcard dib-u-soo-dejin bilaash ah inta badan joornaalada iyo dukaamada ku habboon ama meel kasta oo aad ku aragto astaanta, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad ku darto ugu yaraan $ 10 amaah (qof weyn) markaad iibsaneyso (ama $ 35 haddii aad ka iibsaneyso saldhigga garoonka). Kaararka waxay ku yimaadaan qaabab waaweyn iyo cunug. Waad awoodaa ma hel kaararka Opal dib loo buuxin karo ee joogsiga gaadiidka dadweynaha (marka laga reebo saldhigyada garoonka diyaaradaha) illaa joogsiga uu ku jiro meherad tafaariiqeed oo qayb ka ah dhismaha. Ku darista amaahda kaarka Opal waxaa loo yaqaan 'kor u qaadid'. Dhamaan tafaariiqleyda Opal waxay bixiyaan tas-hiilaad kor u kaca ah. Mashiinnada kor-u-kaca ayaa laga heli karaa inta badan saldhigyada tareenka, dhammaan maraakiibta dagaalka, iyo joogsiyada tareenka fudud. Mashiinnada oo dhami waxay aqbalaan kaararka deynta iyo kaarka (Visa / Mastercard oo leh PIN), qaarkoodna waxay qaataan lacag caddaan ah. Waxaad sidoo kale ku shubi kartaa kaarka deynta ee shabakadda, ama barnaamijka 'Opal' - laakiin waa inaad oggolaataa saacad ka hor intaadan safrin si aad ugu oggolaato kor-u-qaadista inay gaarto akhristaha Opal.
Qiimaha maalinlaha ah waxaa lagu xiraa $ 15.40 Isniinta ilaa Sabtida iyo Axadda $ 2.60. Looma baahna in laga walwalo xuduudaha aaga ama lahaanshaha tigidhka saxda ah maxaa yeelay nidaamku si otomaatig ah ayuu u xisaabin doonaa qiimaha safarka kasta. Faa'iidooyinka kale waxaa ka mid ah koofiyadaha toddobaadlaha ah, iyo qiimo dhimista ugu sarreysa ee tareennada (dhammaadka usbuuca iyo wixii ka dambeeya 9AM iyo ka hor 4:30 PM maalmaha shaqada). Ma jiraan wax qiimo ah oo laga raaco basaska ama doomaha, tanina waxay ka dhigi kartaa safarada tareenka mid ka raqiisan baska aan caadiga ahayn. Kadib sameynta sideed 'safar' usbuuc gudihiis (usbuuca Opal wuxuu soconayaa Isniinta ilaa Axada), safarada soo socda oo dhami waa qiimo nus wiiga ka haray. Safar kasta oo lagu gaaro 1 saac gudahood safarkii hore waxaa loo tixgeliyaa inuu sii socdo safarka. Si kasta oo aad u safartid, dadka isticmaala kaararka Opal weligood lagama qaadi doono wax ka badan $ 60 Isniinta ilaa Isbuuca usbuuca (oo aan lagu darin khidmadaha marin u helka Saldhigga Madaarka). Haddii aad bedesho qaababka gaadiidka intaad safarka ku jirto (tusaale ahaan baska ilaa tareenka) nidaamku wuxuu ku siinayaa qiimo dhimis $ 2 qiimaha safarada labaad iyo kan xiga.
'Hal Safar' Tigidhada Opal waxaa laga heli karaa mashiinno badan oo kor-ka-qaadista ah oo ay ka helaan darawallada basaska ee ka baxsan meelaha Opal oo keliya. Qiimaha ayaa 20% ka qaalisan marka loo eego Opal dib loo buuxin karo, maheysid mid kamid ah kulamada iyo qiimo dhimista ay dib udajin karto Opal waxaadna ubaahantahay inaad tikit u iibsato safar kasta oo aad sameysid (yacni waxaad ubaahantahay inaad tikit labaad iibsato bilowga safarka ku noqoshada), markaa kuwani waa kuwa ugu fiican ee laga fogaado inaad safarto xaddi safar ah mooyee.
Waxaad ku isticmaali kartaa kaarka amaahda aan la xiriiri karin (Visa / MasterCard / American Express) irridda Opal ee tareennada, doomaha iyo tareenka fudud (laakiin ma ahan basaska). Kharashka la raacayaa waa safarka ugu safarka badan sidaa darteed wuu ka qaalisan karaa kaarka Opal ee dib loo buuxin karo. Sidoo kale mahelaysid qiimo dhimis wareejinta. Si kastaba ha noqotee, haddii aad samaynayso dhowr safar oo tareen ah iyo safarro Sydney ah waxaa laga yaabaa inay ka sahlan tahay iibsashada kaar dib loo buuxin karo, umana baahnid inaad ka walwasho qaddarka haraaga ah ee ku harsan kaarka markaad baxeyso.
Si aad u isticmaasho kaarka Opal, si fudud u hay kaarka illaa akhristaha si aad u garaacdo bilowga safarkaaga, iyo ka-goynta dhammaadka. Kani wuxuu khuseeyaa dhammaan gaadiidka marka laga reebo markabka Manly, oo aad u baahan tahay kaliya inaad garaacdo. Waa inaad garaacdaa kahor intaadan fuulin tareenada, tareenka fudud iyo doonta. Basaska, aqristayaashu waxay ku yaalliin albaabbada laga soo galo iyo kuwa laga baxo baska. Dhammaan whar iyo saldhigyadu ma laha caqabado, sidaa darteed waxaad u baahan doontaa inaad xusuusato inaad ka degto tiirarka Opal dhamaadka ama waxaa lagaa qaadayaa qiimaha ugu badan ee safarkaaga. Akhristayaasha basaska ayaa dhaqaaqa marka aad u soo dhowaato joogsiga, ama waxyar kadib marka basku istaago. Waad hubin kartaa inta amaahdu ku hartay kaarkaaga mar kasta oo aad taabatid ama aad xirtid - kaliya eeg shaashadaha ku xiran akhristaha ama caqabadda tikidhada.
Tusaalaha kaararka Opal Top up station.
Waxaad awoodi kartaa diiwaan kaarkaaga bogga Opal. Haddii aad lumiso kaarka diiwaangashan markaa waxaa lagu xiri karaa taleefan ama bogga internetka iyo dheelitirka oo loo wareejin karo kaar cusub. Haddii aad lumiso kaar aan diiwaangashanayn markaa waxaad sidoo kale lumineysaa dheelitirkaaga. Waxaad u baahan tahay inaad soo geliso lambarka taleefanka Australia si aad u diiwaangeliso kaarkaaga, in kastoo aan la isticmaalin inta lagu jiro diiwaangelinta. Haddii aadan weli haysan lambarka taleefanka Australiyaanka ah, waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay inaad ogaato in lambarka taleefanka Australiya uu u ekaan doono wax u eg 0400 123 456.
Ka taxaddar markaad ka tagayso Sydney in kaararka Opal lagu soo celin karo oo keliya koontada bangiga Australia. Wax lacag celin ah laguma sameyn karo kaash ama kaar deyn ah. Haddii aad haysato wax ka badan hal kaar, waad ku wareejin kartaa dheelitirka kaararka (u oggolow 24 saacadood) haddii aad ka diiwaangeliso hal akoon.
Waa wax xiiso leh inaadan ku isticmaali karin American Express mashiinada istaagga si aad u buuxiso ama aad u iibsato tikidhada safarka, laakiin waxaad u adeegsan kartaa American Express si aad toos ugu garaacdo akhristayaasha, ama aad uga iibsato Kaararka Opal garoonka diyaaradaha, ama 7Eleven.
Carruurta da'doodu tahay 15 sano iyo wixii ka yar waxay xaq u leeyihiin qiimo dhimis inta badan gaadiidka dadweynaha. Da'da cunugga doonyaha Matilda waa 14 sano iyo wixii ka yar. Carruurta 3 sano ah oo safarkoodu yahay bilaash (4 sano iyo wixii ka hooseeya maraakiibta Matilda).
Dhamaan xarumaha gaadiidka dadweynaha ee magaalada Sydney / istaaga, waxaad ku arki doontaa calaamada lollipop oo leh hal xaraf xaraf iyo taariikh midab leh oo tilmaamaysa nooca adeegga gaadiidka ee la heli karo (tusaale, tareenka, baska, tareenka fudud ama doomaha). Astaamaha "T" ee liinta macnaheedu waa tareenka, "B" oo buluug ah macnaheedu waa bas ", F" oo cagaar ah macnaheedu waa doomaha iyo "L" casaanka macnaheedu waa tareenka fudud (Tram).
Tareennada hal-doorka laba-geesoodka leh ee Sydney
Sydney waxay leedahay shabakad tareen oo aad u ballaadhan oo ay maamusho Tareenada Sydney, oo daboolaya 882 km oo waddo ah iyo 176 saldhig. Shabakadda tareenku waxay rakaab u qaadi doontaa inta badan aaga weyn, marka laga reebo xeebaha waqooyi-galbeed iyo waqooyiga. Tareenadu waxay u adeegaan saldhig kasta oo ku yaal aagga magaalo -weynta ugu yaraan 30 daqiiqo kasta (marka laga reebo khadka Carlingford) Joogtayntu way ka sarraysaa magaalada, iyo Xarumaha waaweyn (Chatswood, Parramatta, Bondi Junction, Airport -ka, iwm) badiyaa waxay arkaan tareen 10 daqiiqo kasta ama sidaas. Waqtiyada ugu sarreeya (7 AM-9:30 AM iyo 4:30 PM-7PM) waxay leeyihiin tareenno aad u soo noqnoqda iyo sidoo kale dad badan, iyo sidoo kale qaar ka mid ah adeegyadoodii xawaaraha ahaa oo ka booda saldhigyo badan. Filo ciriiriga agagaarka Bartamaha iyo Bartamaha Magaalada.
Waxaa jira qaabab kala duwan iyo da 'tareenno ku shaqeeya shabakadda. Waxaad heli kartaa tareen casri ah oo nadiif ah, fadhiga raaxada leh iyo ogeysiisyada saldhigga oo cad. Haddii kale, waxaad heli kartaa tareen ay ka buuxaan dad u buuran sida sardines, oo leh ogeysiisyo idaacadeed oo si dhib yar loo maqli karo, haddii ay ahaan lahaydba. Ku diyaari naftaada khariidadda shabakadda casriga ah, haddii ay dhacdo. Dhamaan Tareenada Sydney waa kuwo hawo leh.
Inta badan adeegyada tareenka ha 'joojin saldhig kasta oo ha u safrin xadka ugu fog safka. Eeg shaashadaha bixitaanka ee goobta tareenka lagu raaco oo tilmaamaya goorta tareenka soo socda uu imaan doono, meesha uu u socdo, barxadda uu ka tagayo, iyo saldhigyada uu ku joogsan doono. Haddii kale, waxaad sidoo kale dhegeysan kartaa ogeysiisyada si joogto ah u ciyaari doona ka hor iyo goorta tareenku yimaado madasha. Ama si fudud u soo degso barnaamij ku siinaya meheraddo iyo waqtiyo (oo leh cusbooneysiin waqtiga dhabta ah haddii aad leedahay internet-ka moobiilka).
Saacadaha shaqada ka baxsan, inta u dhaxeysa saqda dhexe (1AM maalmaha Jimcaha iyo Sabtida) iyo 5AM, Basaska NightRide ordo ugu yaraan saacad kasta. Basaska NightRide waxay istaagaan saldhigyada badankood iyo xoogaa joogsiyo dheeri ah, laakiin kuma socdaan isla wadooyin isku mid ah. Haddii aad damacsan tahay inaad ku qaadato baska NightRide gurigaaga, hubi khariidadda marinka NightRide. Basaska waa la buuxin karaa habeenada Jimcaha iyo Sabtida.
Mid ka mid ah afarta laga soo galo Saldhigga Magaalada, oo ah xarun muhiim ah oo ku taal shabakadda Tareennada Sydney.
Ka taxaddar intaad ku safreyso tareennada wixii ka dambeeya 8PM, gaar ahaan haddii gaadhigu inta badan cidlo yahay iyo haddii loo safrayo galbeedka Galbeedka weyn, maadaama aan caadi ahayn in maraakiibta aan laga rabin laga helo tareennada xilliyadan. Waqtiga 99% waqtigaas dhib badan kuuma geysan doonaan aan ka aheyn dhawaq, aflagaado iyo naceyb, laakiin waxaa ugu wanaagsan in laga fogaado maadaama khilaafyada aan la rabin ay raaci karaan. U guurida gawaarida kale waxay noqon laheyd fikrad wanaagsan. Tareenada casriga ahi waxay leeyihiin Qodobbo Caawinaad Degdeg ah oo ku jira gaari kasta, oo u oggolaanaya la xiriirka ilaaliyaha tareenka. Haddii kale, ku safar gawaarida dhexe, meel u dhow qeybta waardiyaha (oo lagu calaamadeeyay nal buluug ah). Waardiyuhu wuxuu xiriir la leeyahay booliska iyo darawalka haddii dhibaato ka dhacdo tareenka. Qodobada Caawinta Degdega ah sidoo kale waxaa laga heli karaa saldhig kasta.
Hubi shaqada raadraaca ka hor intaadan u bixin saldhigga; Tareenada Sydney waxay xidhaan qayb ka mid ah shabakada dhamaadka usbuuc dhammaadka waxayna rakaabka u gudbin doonaan basaska haddii khadadka la xidho. Nidaamku wuxuu noqon karaa nus saac ama ka badan safarka caadiga ah. Raadraaca shaqada badanaa waa dhammaadka usbuuca ama habeen dambe maalmaha shaqada oo jadwalka shaqada wadada waxaa laga heli karaa websaydhka tareennada Sydney dhowr bilood ka hor (hubi ka hor intaadan guriga ka bixin maalmaha aad booqanayso).
Bas caadi ah oo magaalada ka socda
Sydney waxay leedahay shabakad bas oo ballaaran. Basaska qaar waxay ka baxaan xaafadaha fogfog sida kuwa Waqooyiga Xeebaha iyo Woqooyi Galbeed ilaa magaalada, laakiin sidoo kale waxaa jira quudiyayaal gaagaaban oo taga saldhigyada tareenka ee hareeraha magaalada.
Waa fikrad fiican inaad sii qorsheyso safaradaada baska waqti hore halka ay suurta gal tahay. Transportnsw.info waxay leedahay astaamo qorsheeye safar oo ku caawiya, iyo sidoo kale khariidado marin iyo jadwallo lagu daabaco. Inta badan joogsiga basaska ayaa leh jadwallo la dhejiyay, iyo sidoo kale khariidad marin oo loogu talagalay waddooyinka ka shaqeeya joogsiga baska.
Waa inaad ku calaamadeeysaa basaska gacan fidsan haddii aad rabto inay adiga kuu istaagaan waana inaad riixdo badhanka JOOJI si aad uga degtid. Si otomaatig ah uma istaagayaan ilaa laga calaamadiyo inay sidaas sameeyaan.
Basaska badankood ma jiraan wax baska saaran oo kuu sheegaya joogsiga aad ku dhowaanayso ama joogsiga aad joogtid. Baska sidoo kale ma laha khariidado dhejis ah. Haddii aad ku sii jeeddo dhul aan la aqoon, ama qaado jadwal warqadeed si aad ula socoto jidkaaga, ama hubi inaad haysato barnaamij la soo dejiyey si loola socdo jidkaaga iyo joogsigaaga (Tripview / Moovit, iwm). Sidoo kale, haddii aad raacdo bas lagu calaamadeeyay "Xaddidnaan Xaddidan" ama "Express" (lambarka dariiqa ayaa ku bilaaban doona L ama X), hubi in basku ku istaago meesha aad rabto. Adeegyada joogsiga xaddidan waxay istaagaan oo keliya joogsiyada waaweyn sidaa darteed waxay kaa dhigi karaan inaad ku socoto qiyaastii 750 mitir ama haddii kale haddii ay ka boodaan joogsigaaga. Si kastaba ha noqotee, adeegyada tooska ah ayaa ka socon kara meel aad uga fog magaalada iyagoon haba yaraatee istaagin, ka hor intaanay dib u bilaabin qaab joogsi caadi ah (basaska xawliga ahi waxay shaqeeyaan oo keliya saacadaha ugu sarreeya). Dhammaan basaska lambarrada caadiga ah leh waxay istaagaan joogsiyada oo dhan, sidaa darteed joogsiga joogsigaaga ama ka degitaanka hal joogsi hore waa khalad aad u culus. Red Metrobuses (dariiqyada nambarada laga bilaabo M) waa marin dheer, basaska magaalada iskaga gudba, oo soconaya 10-20 daqiiqadood oo isdaba joog ah inta lagu jiro saacadaha ay shaqeynayaan. Basaskan mararka qaarkood waxay leeyihiin shaashad muujineysa joogsiga xiga iyo ogeysiisyada dusha sidoo kale. Joojinta Metrobus badanaa waxay leeyihiin magac dusha sare ee istaaga oo si fudud u tilmaamaya adeegyada Metrobus joogsiga gaarka ah.
Waxaa jira laba meelood oo joojinta basaska ee CBD, Wynyard iyo Quay Circular. Labadan qodob ayaa lagu kala tagay safar tareen oo rakaab ah oo hal mar ah. Waxaad u baahan doontaa inaad safarkan samayso haddii aad isku xireyso basaska ka imaanaya waqooyiga buundada dekedda ilaa basaska u socda bariga ama galbeedka, ama dhanka kale. Xarumaha macluumaadka basaska waxay ku yaalliin Wynyard iyo Quay Circular. Inta lagu jiro saacadaha ugu sarreeya basaska qaar ee ka yimaada koonfurta iyo galbeedka waxay ku dhammaadaan Hoolka Magaalada si looga fogaado ciriiriga Xarunta Magaalada.
Basaska badankood waa GPS qalabaysan yihiin, sidaa darteed waxaad isticmaali kartaa barnaamij sida TripView ama Citymapper si aad ula socoto waqtiyada imaatinka waqtiga dhabta ah.
Dhowr wadiiqooyin marin ah ayaa aada xaafadaha Bariga iyo Newtown 24 saacadood maalintii. Adeegyo dheeri ah waxay ku shaqeeyaan dhammaadka Jimcaha iyo Sabtida ilaa Xeebaha Waqooyiga iyo Waqooyiga Galbeed.
Dadweynaha Doomaha Sidney xarunta dhexe waxay ku taal Wareegga Wareegga woqooyi ee CBD. Doomaha waxay maraan wabiga Parramatta iyagoo maraya Balmain iyo Olympic Park, agagaarka Darling Harbor, dhanka Luna Park, dhanka Zoo, Manly, iyo Watsons Bay. Waxay sidoo kale aadaan jasiiradda Garden iyo Jasiiradda Cockatoo. Waxay ku shaqeeyaan kaliya gudaha dekedda Sydney, markaa ma heli kartid doon doonta Bondi. Doomaha doomaha ah waxay aadaan meelaha ugu badan ugu yaraan saacad kasta, oo ay la socdaan adeegyo sarre oo dheeri ah, iyo adeegyo nus saac ah Manly iyo Darling Harbor.
Wareegtada Quay iyo Darling Harbor, wharf kasta wuxuu leeyahay shaashad ballaaran oo muujineysa safarka doonta iyo macluumaad guud. Ka hel meesha aad u socoto shaashadda, taas oo muujineysa goorta adeegga doontaadu ay ka ambabaxanayso iyo xagee laga aadayaa.
In ka badan kaliya gaadiidka waxtarka leh, doomaha waa hab weyn oo lagu arko Sydney Harbor. Safarka doonta ugu wanaagsan ee soo booqdayaashu waa laga bilaabo Wareegtada Wareegga ee bariga ilaa Manly ama, safar gaaban oo ka raqiisan, ilaa Watsons Bay. Diyaar u noqo inaad sawiro ka qaadatid Sydney Opera House iyo Buundada Harbor markaad ka tagayso Wareega Wareega. Doomaha laga raaco Wareegga Quay ee galbeedka illaa Balmain iyo Darling Harbor waxay bixiyaan cudurdaarro waaweyn oo ay kula kulmaan maraakiibta ku hoos socota Buundada Harbor.
Doomaha Manly iyo dekedda gudahood way mashquul karaan, laakiin waa dhif iyo naadir inay gaaraan awood. Heshiiska Opal ee $ 2.60 Axadda waa mid caan ah, gaar ahaan maalmaha 'xeebta' qorraxda, iyada oo muraayadaha daawashada ay si adag u buuxsameen oo safafka fowdada ah. Haddii aad ku sugan tahay magaalada Sydney waqti yar, markaa waxaad u baahan tahay inaad ku bixiso kharashka dheeriga ah si aad u safarto maalmaha shaqada oo aad uga fogaato dhibaatooyinka la xiriira dadka maalinta Axadda ah.
Waqtiyada ugu sarreeya, ayaa Doomaha webiga Parramatta way buuxin karaan oo wey buuxin karaan, waana inaad hubisaa inaad haysato qaab kale oo aad ku dhammaystiri karto safarkaaga. Tirakoobka rakaabka si adag ayaa loo dhaqan galiyaa, mana jiro saf saf wax ku ool ah: haddii hal markab la waayo, dammaanad kama qaadi doontid inaad kan xigi doontid. Muddooyinka ugu sarreysa waxaa ka mid ah: galabtii dhammaadka qorraxdu markay ka soo laabato Parramatta iyo dhammaan meelaha laga soo qaado webiga. Jasiiradda Cockatoo waa meel aan fiicnayn oo lagu xannibo, markaa u oggolow waqti ku filan oo aad doonta ku hesho dhinaca kale iyo soo noqoshada haddii aad u baahato. Fasaxyada iskuulka iyo maalmaha-isniinta 4 PM-6PP at Darling Harbor kuna sii jeedda Parramatta way mashquulsan yihiin sidoo kale (caadi ma tihid hadaad fuulaysid Wareegtada Wareegtada ah halkaas oo doontu ka soo jeedo) sida rakaabka, dalxiisayaasha, iyo maalinta safarada u tartamaya inay guriga gaaraan.
Doomaha gaarka loo leeyahay
Captain Cook Ferries iyo Manly Fast Ferries ayaa iyaguna maamula adeegyada doonyaha oo dhammaystiran oo la tartamaya dawladda ay qandaraaska siisay Sydney Ferries. Doonyaha Degdegga ah ee Manly waxay qabtaan adeeg u dhexeeya Wareegga Wareegga iyo Manly. Doonyaha Captain Cook waxay wadaan Darling Harbor ilaa Quay Circular, Minibar (Khamriga waa laga saaray), Cuntada Xalaal waxaa laga dalban karaa Makhaayadaha Xalaal ee u dhow. eHalal waxay bixin doontaa liis faahfaahsan oo ku saabsan makhaayadaha Xalaal ee u dhow taatyangaroo ilaa Manly iyo adeegyada ku xeeran Harbor iyo Jasiiradaha Harbor. Waxa kale oo ay u wadaan Zoo Express ilaa Taronga Zoo wharf, iyada oo isku -darka gelitaanku uu dhaafo isla qiimihii doonta Ferry Sydney. Waxaad heli doontaa dooni ka sii fiican iyo faallo jidka. Waxay sidoo kale wadaan dooni Manly ilaa Watsons Bay oo bixisa waqti muhiim ah oo lagu badbaadiyo doonta iyada oo loo marayo Wareegga Wareegga. Waxaad ku dhejin kartaa Kaarkaaga Opal -ka ama kaarka deynta si aad u bixisid adeegyada Manry Fast Ferry, adoo adeegsanaya adeeg la yiraahdo OpalPay - hase yeeshe, ma heli doontid mid ka mid ah waxtarrada safarka ee soo noqnoqda.
Doon loo kireeyay
Doonida doon ka sii deyso dekedda si ay kaaga gudubto biyaha. Adeegyo badan ayaa laga heli karaa hareeraha Harbor, iyada oo la is kireysto doon, is kiraysi doonyo qaali ah iyo inbadan. Qiyaastii Sannadaha Cusub ee Eve, iyo maalinta Australia waxay Harborku ku jirtaa mashquulkeeda marka ka taxaddar inaad abaabulto waqti ka hor.
Baabuur xadiid fudud oo Sydney ah oo ku socda Dulwich Hill Line
Waxaa jira khad tareen oo fudud oo ka socda Sydney oo ka socda Bartamaha illaa Dulwich Hill, oo waxtar u leh safarka u dhexeeya Sydney City iyo galbeedka Darling Harbor, casino, Suuqyada Kalluunka, Pyrmont, iyo Inner West. Kordhinta laga bilaabo Central Station ilaa Wareegtada Wareega iyada oo loo sii marayo George St, iyo ilaa Kingsford iyo Randwick ayaa lagu wadaa in la dhameystiro sanadka 2020. La soco in tareenka fudud uu aad u camiran karo, xitaa maalmaha Axadda, markaa haddii aad masaafo gaaban u socoto (Bartamaha Suuqa Paddy, tusaale ahaan), way fiicnaan laheyd inaad socotid halkii.
Qaar ka mid ah saldhigyada tareenka ee hareeraha magaalada ayaa ah marin fudud, oo wiishyo la dhigto dhammaan meeraha iyo jaranjarooyinka ay ka shaqeeyaan shaqaalaha saldhigga si loogu oggolaado tareenka curyaamiinta. Basaska qaar ayaa naafo ka dhiganaya. Dhammaan joogsiyada tareenka fudud waa la heli karaa kursiga curyaamiinta. Helitaanka tareenka fudud waa marinka dusha sare ee dusha sare. Basaska saaxiibtinimada leh ee curyaamiinta, saldhigyada, iyo jidadka ayaa lagu muujiyey jadwalka, iyo barnaamijyada waqtiga dhabta ah.
Haddii aad waqti ku qaadanayso Xarunta Magaalada, oo aad booqanayso meelaha soo jiidashada sida Manly, Bondi, iyo Pyrmont, markaa baabuur ayaa laga yaabaa inuu ka dhib badan yahay qiimihiisa, ciriiri, qorshayaal hal dhinac ah oo adag, iyo baarkin qaali ah oo waqti xaddidan.
Waqtiyada safarka iyo jidadka
Gaadiidka Sydney had iyo jeer waa mashquul, laakiin ka baxsan waqtiyada shaqada ee ugu badan ee baabuurta lagu safro badanaa waa sida ugu dhakhsaha badan hab kasta oo gaadiidka dadweynaha ah. Ciriiri ayaa laga filan karaa waddooyinka magaalada soo gala 6:30 AM-9:30 AM, iyo waddooyinka magaalada ka fog 4:30 PM-6:30PM. U oggolow labanlaab waqtiga safarka ee caadiga ah muddooyinkan - waa ka sii dheer tahay haddii aad isticmaaleyso waddooyin waaweyn. Ciriiriga ayaa aad uga xun uguna dheer labada dhinacba inta lagu jiro galabnimada jimcaha. Wadooyinka qaar waxay la kulmaan ciriiri waqtiyo kale wadooyin aada dhanka dukaamaysiga, isboortiga, beeraha nasashada iyo xeebahu aad ayey cidhiidhi u noqon karaan maalmaha fasaxa sidoo kale - gaar ahaan subaxa sabtida iyo fiidka Sabtida. Wadooyinka hareeraha Bondi Beach iyo xeebaha kale ee hareeraha bari waxay la kulmaan jahwareer xagaaga dhamaadka usbuucyada, basaska badanaa waxaa lagu qabtaa isla baabuurta.
Wadooyinka guud ahaan si wanaagsan ayaa loogu xardhay xaafadaha waaweyn ee xiga ama hareeraha wadada, dhammaantoodna (marka laga reebo waddooyinka waaweyn) waxay leeyihiin magacyo waddooyin ah. In yar oo ka mid ah waddooyinka iskutallaabta ah ayaa lagu calaamadeeyay nambarka xarfaha. Gegada diyaaradaha waxaa laga soo qoraa waddooyin badan oo waaweyn oo leh astaan ​​diyaaradeed.
Wakhtiyada safarka laga bilaabo Xarunta Magaalada ilaa duleedka Sydney waxay qaadan kartaa ilaa 45 daqiiqo gaadiid wanaagsan.
Wadooyinka waaweyn qaarkood, tunelada iyo buundooyinka waxaa laga qaadaa inta udhaxeysa $ 3 ilaa $ 8 iyadoo kuxiran wadada iyo masaafada. Ma jiro wax caqli gal ah oo ka dambeeya kuwooda lacag bixiya iyo kuwa aan kuba bixin - sababaha dhammaantood waa taariikh iyo siyaasadeed. Wadooyinka la bixiyo waxaa lagu muujiyaa ereyga qalinka sabuuradda markaad ku biirto wadada. Kharashka waxaa lagu soo oogay Buundada Harbor iyo Tunnel (koonfurta), Qeybiyeha Bariga (woqooyi), Lane Cove Tunnel, Cross City Tunnel, M7, M5, M4 iyo Falcon Street laga soo galo M1 waqooyiga.
Haddii aad rabto inaad qorsheyso waddo bilaash ah, waxaad ka fogaan doontaa Tunnelka Magaalada Cross, Lane Cove Tunnel, M7 ama Falcon Street fuulitaanka si cadaalad ah si fudud. Si kastaba ha noqotee, way adag tahay in laga fogaado isgoysyada isgoysyada ah haddii aad aadeysid Sydney / Manly, Sydney / Northern Xeebaha ama beerta xayawaanka ee baabuurka ah. Haddii aad isticmaaleysid GPS hubi waddooyinka bilaashka ah ee lacag la'aanta ah, maxaa yeelay meel ka baxsan meesha ugu sarreysa waddooyinka lacag bixinta qaarkood waxay bixiyaan waqti yar oo lagu keydiyo.
Kulliyadaha lacag-bixinta oo dhan ayaa isticmaala oo keliya lacag bixinta elektarooniga ah oo haddii aad isticmaasho kuwan waxaad u baahan tahay inaad haysato a idlaan ama a tag.
A idlaan (oo sidoo kale loo yaqaan a e-marin) waa habka ugu fudud ee lagu bixiyo canshuuraha. Waxaad ku bixin kartaa kaar illaa 48 saacadood ka dib safarkaaga wadada weyn. Waxay kuxirantahay adeeg bixiyaha, waxaad iska diiwaan gelin kartaa taarikadaada bogga, ama waxaad kala soo bixi kartaa barnaamij oo waad bixin kartaa intaad safreyso. Bixiyeyaasha gudbinta waxay ka qaadaan lacag dheeri ah inta saxda ah. Dhammaan bixiyeyaasha waxay leeyihiin kaararka dhammaan waddooyinka laga qaado - soo qaado midka adiga kuu shaqeeya.
A tag (oo sidoo kale loo yaqaan a E-tag) waa tarjumaan ku dhegan gudaha shaashaddaada hore. Tani waxay ku lug yeelan kartaa lacag bixin hore ama dhigaal iyo / ama ujro bille ah. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa inaad dalbato oo aad hesho calaamadda safarka ka hor. Faa'iidada ayaa ah in inta badan aysan jirin wax dheeri ah oo lagu dabaqo culeyska dhabta ah laftiisa, sidaas darteed waxay u badan tahay inay macno u yeelanayso joogitaanka dheeraadka ah.
Websaydhka 'Sydney Motorways' wuxuu ku siiyaa xiriiriyeyaal dhammaan tag iyo pass bixiyeyaasha.
Ku dhowaad dhammaan shirkadaha gawaarida kirada ah waxay ku bixiyaan calaamadda baabuur kasta, waxayna ka qaadaan khidmadahooda adeeg. Ma lihid ikhtiyaar aad ku isticmaasho adeeggooda ama aad ku iibsato kaarkaaga.
Inaad bixin weydo qaddar 48 saacadood gudahood ah ka dib markaad baabuur ku wado wadada taraafikada waxay la kulmi doontaa $ 15 lacag maamul ah oo dheeri ah. Haddii aad ku jirto baabuur kiro ah, shirkadda baabuurta kirada ayaa kaa qaadi doonta lacag dheeraad ah tan kaarkaaga deynta.
Baabuur dhigashada magaalada iyo nawaaxigeeda waxay u baahan tahay xoogaa tixgelin ah. Inta badan booska la dhigto ee laga heli karo Xarunta Sydney iyo nawaaxigeeda waa waqti xaddidan, khidmaduna way codsan kartaa.
Gaarigaaga dhigashada Xarunta Magaalada ee saldhigyada gawaarida la dhigto marwalba waa suurtagal laakiin way noqon kartaa aad qaali ah haddii aadan si sax ah u qorsheynin. Filo inaad bixiso $ 90 muddo seddex saacadood ah meelaha gawaarida la dhigto ee dhexe haddii aad baabuur wado. Qiimayaashu guud ahaan si weyn ayey u yareeyaan dhamaadka usbuuc dhammaadka si kastaba ha noqotee iyadoo baarkinka gawaarida qaarkood ay ka qaadaan $ 15-20 khidmad fidsan oo loogu talagalay dhigashada maalinta oo dhan. Lacag dhimista baarkinka oo la dhimay ayaa sidoo kale la sameeyaa maalmaha shaqada ee loogu talagalay baarkinka shimbiraha hore, halkaas oo ay tahay inaad gasho oo aad ka baxdo xilliyada laguu qabtay. Tusaale ahaan waxaad dhigan kartaa maalinta oo dhan Opera House lacag dhan $ 16 ilaa intaad soo galeyso kahor 10ka subaxnimo oo aad ka tegeyso 3 PM-7PM. Ma jiro muddo nimco, markaa ma bixi kartid xitaa hal daqiiqo kahor 3PM, oo waxaa lagaa qaadayaa qiimaha baarkinka maalinta oo ah $ 42 haddii aad ka daahdo 10 sekan. Meelaha baabuurta la dhigto ee magaalada badankood waxay bixiyaan qiimo jaban (qiyaastii $ 15- $ 25) fiidkii iyo dhamaadka wiigga. Boos sii dhigashada baarkinka khadka tooska ah waxay horay u bixin kartaa keyd aad u fara badan, oo leh dalabyo ugu hooseeya $ 10 oo loogu talagalay dhammaan baarkinka maalinta oo dhan mararka qaarkood la heli karo.
Gawaarida la dhigto ee CBD guud ahaan waxay suurtagal tahay kaliya 8-da subaxnimo iyo wixii ka dambeeya 6:30 PM maalmaha-usbuucyada, xitaa markaa ka dib, qiyaastii waa la qiyaasaa illaa 10PM oo ah $ 2.20-3.30 saacaddii. Sabtiyada iyo Axadaha, meelaha baabuurta la dhigto badankood waxay leeyihiin 4 saacadood oo xadidan, mar labaadna waxaa lagu qiyaasaa $ 1.10-2.20 saacaddii. Meelaha maalintii oo dhan waxaa mararka qaar laga heli karaa Domain / Mrs Macquarie's Chair iyo Hickson Road, laakiin goobahan waxaa inta badan qaata rakaab, iyo, maadaama la qiyaasay, heshiis shimbir hore ayaa ka shaqeyn kara mid ka jaban qiimaha cabirka. Mitirka baarkinka ayaa aqbalaya bixinta kaarka deynta Qiimo la mid ah ayaa laga qaadaa Waqooyiga Sydney.
Hoteellada magaalada ayaa si joogto ah lacag uga qaata baarkinka martida.
Baabuurta la dhigto Xarumo iyo xeebo badan oo ku teedsan xaafadaha waxay noqon kartaa arrin waqti lagu lumiyo oo la raadiyo meelaha baabuurta la dhigto. Caadiyan baabuur dhigashada masaafad socod fudud oo Xarumahan waxay leedahay xadid xadid wakhti-badiyaa 2-3 saacadood. Barkinnada baabuurta ee Xarunta Dukaamaysigu sida caadiga ah waxay leeyihiin xaddidaad la mid ah, iyada oo khidmaddu khuseyso muddada xorta ah ee bilowga ah.
Saldhigyada tareenada qaarkood waxay leeyihiin maalintii oo dhan dhigashada baabuurta bilaashka ah Saldhigyada waaweyn, tan ayaa la buuxin karaa ka hor 8AM. Saldhigyada yar-yar ee leh adeegga tareenka ee soo noqnoqda waxay u muuqdaan kuwo hela helitaan wanaagsan oo dhigasho. Sabtiyada iyo axada waa sahlan tahay inaad boos ka hesho meelaha baabuurta la dhigto ee rakaabka. Saldhigyada gawaarida la dhigto waxaa lagu calaamadeeyay khariidadaha Tareennada Sydney.
Gawaarida la dhigto xeebaha qaar, maalmaha fasaxa ee xagaaga, inta badan waxay noqon kartaa wax aan macquul aheyn. Xeebaha qaar waxay ku yaalliin xaafadaha hareeraha magaalada, iyadoon lahayn goobo waaweyn oo baabuurta la dhigto. Hubi jihooyinka ku habboon ee hagayaasha wixii macluumaad dheeraad ah.
Ganaaxyada baarkinka ee Sydney waa $ 108 haddii aad dhaafto waqtiga baarkinka loo ogol yahay ama aadan ku bixin khidmadda meel gawaarida la dhigto oo sharci ah. Dib-u-buuxinta mitirka ama ku raridda baabuurkaaga isla aagga aagga baabuurta la dhigaa kaa saari maayo ganaax. Gawaarida la dhigto aag aan joogsi lahayn waxay kugu kici doontaa in ka badan $ 200 (oo lagu muujiyey calaamado ama xariiq adag oo jaalle ah meel u dhow wadada). Haddii aad baarkin u dhigatid si sharci-darro ah oo aad gaarigaaga ku sugto, waxaa laga yaabaa inaad aragto inaad haysatid meesha shatiga lagu sawiray lagana ganaaxay ka hor intaadan fursad u helin inaad ku sii socoto - ha filanin digniin. Haddii aad sharci darro dhigato meel naafo ah, ganaaxu waa $ 541. Haddii lagugu ganaaxo waqti ka badan, laguma ganaaxi doono markale isla maalintaas si aad ugu raaxeysato meesha aad dhigato.
Wadooyinka bannaani waa aagag aan laga joogsan karin waddooyinka waaweyn inta lagu jiro xilliyada ugu sarreysa, oo lagu calaamadeeyay astaamo waddada lagu maro iyo khadka jaallaha ah oo jaban. Ganaaxyada waxay gaarayaan ilaa $ 400 si ay dib ugula soo noqdaan gaarigaaga marka la jiido. Jidadka ayaa sidoo kale bixiya fursado baarkinka haddii aad rabto inaad dhigato uun 10ka ka dib.
Xawaaraha wadista Sydney
Xadka xawaaraha si isdaba joog ah ayuu isu beddeli karaa, xitaa isla wadadaas. Xadka xawaaraha ayaa hoos u dhacaya meelaha dhaqdhaqaaqa dadka lugeynaya, iskuulada (40 km / h 8 AM-9:30 AM iyo 2:30 PM-4PM maalmaha iskuulka), shaqada wadada, iyo sidoo kale xaaladaha wadista. Wadooyinka qaar waxay leeyihiin xaddidaad xawaare isbedbeddelaya oo isbeddelaya xilliyada mashquulka badan. Waddo kasta oo ku taal Sydney waxay leedahay xaddid xawaare calaamadeysan oo sida kaliya ee lagu hubin karo xadka ay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho calaamadaha. Kama sheegi kartid xadka xawaaraha adigoo fiirinaya wadada. Xaddiga xawaaraha badanaa waa 50 km / saacaddii waddooyinka la deggan yahay, 60 km / h ilaa 80 km / h waddooyinka waaweyn, mararka qaarna ka sarreeya qaybaha waddooyinka waaweyn.
Xadka xawaaraha si ballaaran ayaa loo dhaqan galiyaa, ganaaxyaduna waa kuwo daran. Dhaqan galintu badanaa waa kamaradaha xawaaraha go'an, laakiin sidoo kale kamaradaha xawaaraha mobilada (laga soo qaado gawaarida xawaaraha dhajisa leh ee gawaarida la dhigo ee wadada dhinaceeda ah), "qoryaha" xawaaraha gacanta ku shaqeeya ee ay wadaan booliska, iyo gawaarida booliska ee roondada. Kaamirooyinka xawaaraha ayaa lagu rakibay isgoysyo badan oo taraafikada taraafikada lagu xakameeyo, kaamirooyinkan ayaa sidoo kale dhaqan galiya "joogsiga nalalka gaduudan" iyagoo qaadaya laba sawir, midka hore ee gaariga oo ka talaabaya laynka joogsiga (lagu sawiray wadada) halka nalka uu casaan yahay , iyo tan labaad sida gaariga uu uga gudbo isgoyska (taas oo cadeyneysa inaysan si fudud u aheyn gaariga inuu istaago mitir aa ama uu dhaafay xariijinta joogsiga).
Ku jebinta xadka xawaaraha 10 km / saac ama ka yar waxay soo jiidanaysaa ganaax (sida Janaayo 2018) oo ah $ 116, 11-20 km / hr ganaax dhan $ 269, 21-30 km / h $ 462, 31-45 km / h $ 884, iyo in kabadan 45 km / h $ 2,384 iyadoo isla goobta lagula wareegayo laysanka darawalnimada. Ciqaabtu waa ka sarreysaa darawalada aan khibrad lahayn, iyo aagagga iskuulka inta lagu jiro saacadaha fulinta maalmaha dugsiga. Intaas waxaa sii dheer, “dhibcaha hoos u dhaca” oo la miisaamay waxaa la siiyaa dadka haysta shatiga Australiyaanka ah, taasoo keentay in si toos ah aan rafcaan looga qaadan karin 3 bilood ama liisanka lixda bilood marka tiro horay loo go'aamiyay oo ah dhibcaha hoos u dhaca uu darawalku ku ururiyo muddo 6 sano gudahood ah. Ganaaxyada dhibcaha dhibcaha ayaa labanlaabaa inta lagu jiro fasaxyada iskuulka iyo inta lagu jiro fasaxyada fasaxa dadweynaha.
Taksi ama Uber
Tagaasidu waa hab ku habboon in lagu tago agagaarka Sydney. Iyaga oo ay weheliso Uber, waxay kaloo noqon karaan ikhtiyaarka kaliya ee gaadiid ee la heli karo meelaha qaarkood habeenka dambe marka tareenada iyo basaska caadiga ahi istaagaan. Caadi ahaan way sahlan tahay in taksi la hoos mariyo dariiqa CBD, ama lagu qabto mid ka mid ah darajooyinka taksiyada oo ku yaal inta badan Xarumaha magaalada. Jiritaanka tagsi waxaa lagu muujiyaa calaamadda “taksi” oo iftiimisay gaariga dushiisa. Haddii iftiinku daaran yahay, waa la kiraysan karaa; haddii iftiinku bakhtiyo, kaabsigu waa fadhiyaa. Waxa kale oo aad ballansan kartaa taksi adoo wacaya mid ka mid ah shirkadaha tagaasida ama ku ballansanaya internetka.
Ka taxaddar isbeddelka 3PM iyo degdegga fiidnimada Jimcaha. Waxay noqon kartaa wax aan macquul aheyn inaad tagsi hesho 2:30 PM-3:15PM. Waxay u adagtahay 2:30 AM-3:30AM, maadaama ku dhowaad dhammaan wadayaasha wadajirka isku badalayaan isku mar. Waxay sidoo kale ku yar yihiin fiidkii Jimcaha iyo Sabtida. Sii sii qabsashada horay ma aha dammaanad, maxaa yeelay shaqooyinkan waxaa si elektaroonik ah loogu siiyaa darawallada, kuwaas oo laga yaabo ama ay diidaan shaqada. Way fududahay in la sugo saacad ama ka badan tagsi la sii ballamiyey 24 saac ka hor fiidnimada Jimcaha iyo Sabtida. Wicitaanka shirkada tagaasida iyo cabashada ayaa badanaa caawin doonta (hadii hawlwadeenadu laxiriiri karaan dhibaatadaada, waxay leeyihiin awood ay ugu fidiyaan darawal tagsi dhiirigelin ay ku qaataan qiimahaaga). Joojinta shaqadaada iyo wicitaanka shirkad kale oo taksi oo murugaysan waligood waxba tari maayo maadaama shirkadaha tagaasida ay leeyihiin nidaamyo wax wareejin ah oo arkay in shaqadaada lagu wareejiyay haddii shirkad kale ay leedahay awood dheeri ah. Waxaad uun ku dambayn doontaa xaga dambe ee safka mar labaad. Fiidka oo aan ahayn Jimcaha iyo Sabtida badiyaa way fiican yihiin.
Inta lagu jiro waqtiyada mashquulka ah, darawalada qaarkood oo damiir laawayaasha ah ayaa isku dayi kara inay ka baxaan albaabka iyagoo xiran oo ku weydiiya meesha aad daaqada ka marayso oo kaxeynaya hadii meesha aad ku socoto ay aad ugu dhowdahay ama aysan ku sii jeedin gurigooda, in kasta oo ay taasi tahay sharci daro Hadaad awoodo gal ka hor waxaad u sheegtaa meesha aad u socoto - sharci ahaan, waa inay ku qaataan.
Waxaa jira laba mitir: sicirka maalinlaha (sicirka 1) oo calanku ku dhacay $ 3.30, masaafada u dhiganta $ 1.99 / km, sicirka "sugitaan" ee ah $ 0.85 / min, iyo khidmadda dalabka ee $ 2.50; iyo sicirka habeenkii (sicirka 2 - ee lagu dabaqi karo safarada bilaabmay inta udhaxeysa 10 PM-6AM), taas oo kudareysa 20% dheeri ah heerka masaafada. Waad ka hubin kartaa qiimaha uu taksigaagu isticmaalayo adigoo raadinaya 1 ama 2 oo ku xigta khidmadda hadda jirta: haddii loo dhigo 2, waxay isticmaaleysaa sicirka habeenkii. Sicirka loogu yeero “sugitaanka” ayaa la qaadaa mar kasta oo uu xawaaruhu ka hooseeyo 25 km / saacaddii. Safarada gawaarida ciriiriga ah, waxaa macquul ah in xaddi badan oo safarka ah lagu soo dalaco heerka "sugitaanka". Dhamaan tagaasida Sydney waa la cabiray darawalada tagaasida ee lagu amaanayna wadada ayaa qaadi doona sicirka mitirka, iyadoo wixii kharash ah ee canshuuraha si toos ah loogu daro safarka. Tagaasida loo yaqaan 'Silver Service' waa gaadiid raaxo badan, laakiin waxaa lagu qaadaa qiime la mid ah taksiyada caadiga ah.
Tagaasida ayaa qaata dhamaan kaararka amaahda waaweyn. Waxay ka qaadaan 5% dheeraad ah dusha sare ee tikidhada tan. Qaar badan oo shirkadaha tagaasida waxay leeyihiin barnaamijyo u gaar ah. ihail waxaa maamula NSW Taxi Council, waxayna u oggolaaneysaa marinka dhammaan tagaasida heerarka caadiga ah.
Rakaabka waxaa laga rabaa inay bixiyaan dhamaan lacagaha laga qaado safarkooda. Darawallada ayaa badanaa qaadi doona waddooyinka laga qaado mooyee intaad ka codsato mooyee. Kirada waxaa si otomaatig ah loogu daraa mitirka sida safarka ah.
Rakaabku waxay xaq u leeyihiin inay xakameeyaan qaboojiyaha iyo raadiyaha sidaa darteed weydii darawalka. In kasta oo inta badan taksiilayaashu ay u dhaqmaan si la aqbali karo, waxaa jira warbixino la soo sheegay oo ku saabsan dhacdooyinka darawallada tagaasida oo si aan habboonayn ula dhaqma haweenka: marwalba way ka ammaan badan tahay in la fariisto gadaasha gaariga.
Khaanad siinta looma baahna ama guud ahaan waa la filayaa. Si kastaba ha noqotee, ku soo ururinta qiimaha taksiga illaa dollarka soo socda (ama shan ama toban doolar, oo kuxiran sicirka salka) waa caadi caadi. Dhinaca kale, haddii dirawalku wareejiyo qiimaha hoos doolarka kuugu dhow, ku aqbal nimco.
Uber waxay bixisaa beddel ku habboon tagaasida, iyo keyd badan oo kharash ah marka aysan jirin wax kor u kaca ah. Ubers waxay had iyo jeer qaadi doontaa wadada ugu dhaqsaha badan (oo ay kujiraan canshuuraha marka loo baahdo) ilaa aad u sheegto inay jid kale qaadaan. Iyagu waa wax walba oo caan ku ah tagaasida magaalada iyo xaafadaha badankood. Taxify sidoo kale waxaa laga heli karaa Sydney iyadoo la tartameysa Uber.
Baaskiilka iyo dadka lugeeya ee ku yaal Bartamaha Magaalada Sydney.
Haddii aad tahay qof taam ah oo khibrad u leh baaskiil wadista magaalooyinka, oo loo isticmaali jiray inaad fuusho waddooyin fara badan oo taraafikada culus, ka dib uun fuul baaskiilkaaga. Baaskiilleydu waa la oggol yahay oo keliya meel kasta oo ka mid ah waddooyinka Sydney, marka laga reebo waddooyinka waaweyn ee waddooyinka waaweyn ee ay astaamaha baaskiilku sida caadiga ah kuugu tilmaami doonaan wadada kale. Jidadka Kerbside inta badan waa cidhiidhi, sidaa darteed raac adadag, la arko, oo qaado haadka buuxa marka aad ogtahay inaysan jirin qol ku filan oo la maro. Baaskiiladaha waxaa loo oggol yahay marinnada basaska (sida waddooyinka magaalada), laakiin ma aha oo keliya waddooyinka basaska (sida buundada dekedda, iyo T-ways).
Bartamaha magaaladu si gaar ah uma aha dadka baaskiilka wada marka loo eego taraafikada. Sidoo kale ma aha mid fidsan - waxaad filan kartaa buuro joogto ah laakiin majiraan jaranjarada sare ee marathon. Cimiladu, si kastaba ha ahaatee, caadi ahaan waxay u fiican tahay baaskiilka.
Haddii aad raadineyso raacitaan deggan, tiro aamusnaan ah oo waddada ah iyo waddooyin lugeynaya / baaskiil wadaag ayaa la heli karaa, laakiin way adkaan kartaa in la helo. Meel fiican oo laga bilaabo waa Sydney Olympic Park oo aad ka heli karto lugaha wareeggaaga waddooyinka waaweyn ee ka baxsan wadada; markaa, haddii aad rabto, waxaad raaci kartaa Wabiga Parramatta ilaa Parramatta ama raacida Wabiga Cooks ilaa Botany Bay ee Koonfurta Sydney. Buundada Harbor waxay leedahay haad wareeg ah oo loogu talagalay, oo ku habboon da 'kasta, laakiin isla marka aad ka degto buundada (iyo hoos u dhig jaranjarada!) Waxaad dib ugu laabanaysaa jidadka magaalooyinka ee Milsons Point.
Wareegga Bourke St waa waddo waqooyi-koonfur ka xigta Bariga Magaalada iyo meel xiisa leh oo lagu dhex maro Woolloomooloo, Darlinghurst iyo Surry Hills. Hoosyo badan iyo kafateeriyo badan si loo jabiyo safarka. Qaar ka mid ah dariiqyada kale ee goos gooska ah ayaa ka furmay Xarunta Magaalada, laakiin weli ma samaynayaan shabakad isku xidhan, waxaana laga yaabaa in safarkaagu si fudud ugu dhammaado waddo mashquul badan oo aan la cafin karin haddii aadan hore u sii qorsheyn.
Wadooyinka kale ee wareega badanaa badiyaa waa wadiiqooyin la rogo, markaa iska jir iska ilaalinta, calaamadaha dariiqyada, xididdada iyo laamaha si istaraatiiji ah loogu dhajiyay waddooyinka wareega - iyo sidoo kale dadka lugaynaya. Haddii baaskiil wadid habeenkii aad hubiso inaad leedahay nal dhalaalaya oo iftiimiya jidkaaga.
Waa sharci darro in baaskiil lagu raaco wadooyin lugeed mooyee haddii aan lala wadin carruurta ka yar 12 sano. Xaqiiqdii tani si cadaalad ah ayaa si daciif ah looga fuliyaa xaafadaha, laakiin waa wax iska caadi ah in dadka lagu ganaaxo baaskiil wadista iyaga oo maraya suuqyada dadka lugaynaya ee magaalada sida Pitt St Mall ama Martin Meesha. Bannaanka magaalada dhexdeeda waxaad inta badan raaci kartaa jidadka xasilloon, oo ku boodbooda jidka loo maro wax yar oo fidsan haddii ay wax badani timo yeeshaan. Koofiyadaha baaskiilku waa sharci, sidoo kale nalalka iyo iftiimiyaasha habeenkii.
Baaskiilada waxaa lagu qaadan karaa tareenada oo dhan lacag la'aan. Laakiin inaad tareen ku qabsato Bartamaha Magaalada ama aad ugu dhowdahay magaalada meesha ugu sarreysa waxay macnaheedu noqon kartaa inaad sugto adeegyo dhowr ah si aad u hesho mid kugu habboon. Fiiri jadwalka shaqada saacadaha dhammaadka wiigga, marka basasku beddelaan tareenada oo ka dhigaan qaadashada baaskiilada mid dhib badan. Haddii aad baaskiil ku raacdo tareen, tixgeli dadka kale ee safarka ah adiga oo aan albaabada xirin, gaar ahaan markaad soo gasho iyo marka aad ka baxeyso.
Xarunta Sydney hadda waxay leedahay qorshe Mobike oo aan lahayn deked la wadaago. Si fudud u soo dejiso barnaamijka, bixi deebaaji la soo celin karo, oo waxaad ku qaadan kartaa baaskiilkaaga ugu dhow oo aad ku raaci kartaa meel kasta $ 1.99 30kii daqiiqo. Ku dhig meel kasta oo aad jeceshahay. Waa hab sahlan oo lagu mari karo buundada dekedda kaliya $ 2. Kirada baaskiilka muddada dheer ayaa laga heli karaa meelo badan oo Sydney ah. Nasiib darro, kirada baaskiilka laba baaskiil maalintii inta badan waxay ku kacdaa wax ka badan kireysiga baabuur yar iyo batrool maalintii (qiyaastii $ 50 halkii baaskiil). Si kastaba ha ahaatee, waqtiyo gaaban meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa in qiimahoodu macquul yahay (tusaale ahaan Sydney Olympic Park) oo laga qaado $ 15 saacaddii. Sidoo kale, waa inaad tixgelisaa kharashka dheeraadka ah haddii baaskiilada la xado ama la dhaawaco. Si kastaba ha ahaatee, waxay aad ugu sahlan yihiin in la dhigto, waa cagaar waxayna noqon karaan kuwo xiiso badan. Eeg maqaallada degmada liisaska kirada baaskiilka.
Haddii aad rabto inaad ku biirto raacid dheer, kooxaha adeegsada baaskiilada badankood ee agagaarka Sydney waxay abaabulaan raacitaanno dhammaadka usbuuca heerar kala duwan oo jimicsi ah. Badanaa wax lacag ah oo lagaa qaado ma jirto.
Sydney aad bay u saaxiibtinimo u tahay dadka lugaynaya, oo sidaad had iyo jeer wax badan u arki doontid marka aad lugaynayso markaad lugaynayso marka loo eego taayirrada. Maalmaha qoraxda leh shaar gacmo dheere ah, muraayadaha indhaha, muraayadda qorraxda iyo malaha xitaa koofiyad ayaa lagula talinayaa. Waxay qaadataa ilaa 45 daqiiqo in laga socdo Saldhigga Dhexe ilaa bartamaha magaalada ilaa Opera House. Wixii faahfaahin ah ee ku saabsan socdaalka socdaalka ah ee ku socda Bartamaha Sydney, ka eeg Socodka Socdaalka ee Sydney.
Sidoo kale fiiri: Sydney oo leh carruur
Bridge Harbor oo ku dhuumanaya dhabarka Opera House
Inta badan astaamaha Sydney waxaa lagu arki karaa Xarunta Magaalada oo leh astaan Sydney Opera House iyo sidoo kale booqashada Art Gallery of New South Wales, Taallada Sydney, St Mary's Katidral, Jardiinooyinka Royal Botanic iyo Maktabadda Gobolka New South Wales.
Midigta ku xigta Xarunta waa degmada taariikhiga ah ee The Rocks halkaas oo aad ku aragtid dhaxalka Sydney iyo sidoo kale ku dhex lugaynta Sydney Harbor Bridge.
Darling Harbor waa galbeedka Xarunta Magaalada waxayna siisaa soo jiidasho badan sida Madxafka Badda Qaranka, Suuqa Kalluunka ee Sydney, Dunida Duurjoogta ee Sydney, Aquarium-ka Sydney iyo Matxafka Powerhouse.
Ka gudub buundada Harbor si aad u gaarto xeebta Waqooyiga Hoose halkaas oo aad booqan karto Beerta Luna. Beerta Taronga waxaa laga heli karaa doon khaas ah oo ka timaadda Wareegga Wareega.
Doonta u sii qaado Manly halkaas oo aad ku booqan karto kuwa caanka ah xeebta oo u lugee Dhexe Dhexe wuxuu maraa dhufeysyo badan oo madaafiic ah oo xeebeed oo laga dhisay buuraha Sydney Harbor dabayaaqadii qarnigii sagaal iyo tobnaad.
U soo bax qorraxda si aad u booqato xaafadaha Bariga halkaas oo aad ka heli karto adduunka oo caan ah Xeebta Bondi, iyo waliba xeebo kale oo badan iyo La Perouse.
Sydney waxay bixisaa fursado badan oo lagu ogaado dhaxalka wadaniga ah, oo lagu xardhay dhagxaan, qoob ka ciyaarka iyo farshaxanno farshaxan si loo baadho.
Quruxda ay Sydney caanka ku tahay aduunka waxaa qeexay Sydney Harbor oo si fudud looga arki karo magaalada iyo meelo badan oo ku xeeran. Dekedda weyn ee dabiiciga ahi waxay sabab u ahayd in heshiiskii asalka ahaa ee ciqaabta laga aasaasay aagga, oo u dhow halka hadda loo yaqaan Wareegga Wareegga.
Habka ugu wanaagsan ee lagu arko labadaba dekedda iyo soojiidashada Sydney waa inaad doon kasta ka qaadatid Wareegga Wareegga. Kuwani waa kuwo aad u macquul ah oo qiimo leh oo jecel dalxiisayaasha kuwaas oo ka arki kara inta badan dekedda jidadka kala duwan ee la bixiyo. Ku sii jeedka Manly ee doonta waxay ka dhigeysaa safar aad u fiican oo 30 daqiiqad ah qayb ka mid ah qiimaha safarka dekedda ganacsiga.
Caalamka caanka ah Sydney ilaa Hobart Yacht Race wuxuu bilaabmaa sanad walba Maalinta Feerka, ee Harbor Sydney. Kumanaan ka mid ah farshaxanada daawadayaasha ayaa u baxa biyaha si ay u sagootiyaan doonyaha marka ay u socdaan safarkooda murugada leh ee Hobart. Xirfadaha Seaworthy waxay raaci karaan yaashyada iyada oo loo marayo Sydney Heads ilaa badda furan. Waxaad sidoo kale ka arki kartaa tartanka ka soo baxa dekedda sida Watsons Bay. halkaas oo aad ku arki karto iyaga oo xagga badda u soo shiraacaya, ka dibna u gudbaya farqiga u dhexeeya si aad u aragto inay badda ka shiraacanayaan.
Duulimaadyo Muuqaal ah. Tacabiyada iyo tababarka duulimaadka. Habka cajiibka ah ee lagu arko Sydney Harbor wuxuu ka yimaadaa hawada. Red Baron Adventures waxay duulimaadyo dabiici ah ku maraysaa Sydney Harbor iyo Xeebaha Waqooyiga maalmaha ugu badan sanadka (cimilada oo saamaxaysa) qol furan oo furan oo ah Pitts Special bi-day. Waxay sidoo kale leeyihiin wadooyin joojiya Duulimaadyada aerobatic oo loo heli karo kuwa xiisaha badan (kuwani laguma qaban Sydney Harbor). Duulimaadyadu waxay u dhexeeyaan $ 440 ilaa $ 660 waxayna aadaan inta udhaxeysa 45 min ilaa 80 daqiiqo.
Axdiga Yacht iyo Doonta. "Sydney Boat Hire", 02 8765 1222. Soo hel xeebta iyo jasiiradaha ku xeeran hareeraha Sydney Harbor markab kiraysan ama doon iswada. Baro wadida doon ama hageheeda ayaa la kireystay, oo la heli karo 7 maalmood usbuucii, qiimayaashu waxay ka bilaabanayaan $ 195 illaa 2 saacadood. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xeebaha Sydney waa meesha ugufiican ee lagu qaato maalin xagaa diiran, halkaas oo aad kari karto dabaasha or ciidda jiifso wadnahaaga ku qanacsan. Kuwa ugu caansan waa Bondi Beach, Manly iyo Coogee, in kasta oo kuwa kale oo badani ay leeyihiin soo jiidasho u gaar ah. Waxaa laga yaabaa inaysan noqon mayl xeebo dahabi ah sida Queensland, laakiin waxaa jira noocyo badan, oo ka bilaabma xeebta badda ee dhextaagan inta u dhexeysa madaxyada dhaadheer ee xaafadaha Bariga illaa meelaha xasilloon ee ku soo food leh dekedda Mosman. Bondi iyo Coogee waa boorsada boorsada halka Manly iyo Cronulla ay dareemayaan magaalooyin xeebeed gooni ah. Ku qoy jawiga ciriiriga ah ee dadka kale ee qorrax-doonka ah ee xeebaha bari, ama noqo mid ka mid ah kuwa ku raaxeysanaya kalinimada Waqooyiga Xeebaha iyo Royal National Park. Ku dhiirran hirarka badda, ama ku buufin balliyada dhagaxa hoose ee hoose. Xitaa xilliga qaboobaha, waxaad ku biiri kartaa nafta adag ee ilaalinaya nidaamkooda jimicsiga ee biyaha qabow.
isticmaalaysa mid ka mid ah xeebta badweynta waaweyn ee Sydney, oo ah khibrad Australiyaanka ah. Xeebaha waawayn (Bondi, Manly, Cronulla) waxay leeyihiin iskuulo dusha sare iyo meelo aad ka kireysan karto sabuurada. Dadka deegaanku waxay leeyihiin waxyaabaha ay jecel yihiin ee qarsoodiga ah ee Xeebaha Waqooyiga iyo Maroubra, waxayna noqon karaan dhul dhuleed.
Kayak iyo doon yar
Marinnada biyaha ee Sydney waxay bixiyaan huuritaan weyn iyo kayaking, waadna sahamin kartaa baadiyaha Sydney, taariikhda, iyo guryaha u gaarka ah hareeraha biyaha. Waxaa jira meelo badan oo laga kireysto, ama xitaa loo maro safar hagitaan ah.
Candhuuf ama candhuuf ku tuf markab
Beerta Qaranka ee Lane Cove iyo Royal National Park waxay leeyihiin doomo iyo karak saacaddiba - fiiri qoolleyda iyo xayawaanka shimbiraha intaad fuuleyso
Waad ku safri kartaa wabiga Georges Woronora, ama webiga Port Hacking ee ka yimaada Bundeena.
Waad ka kireysan kartaa doonyaha Rose Bay, waxyar oo bariga magaalada ah.
Sydney waxay bixisaa kaluumeysi hufan in kastoo aan lagu talin in laga kalluumeysto Sydney Harbor ee galbeedka Buundada Harbor wasakhda darteed kalluunka waxaa lagu sumeeyay dioxin taas oo waxyeello u leh aadanaha. Si kastaba ha noqotee waxaad arki doontaa dadka deegaanka oo ka kalluumeysanaya dekedda. Waad iska diiwaan gelin kartaa jaartarka kalluumeysiga si uu kaaga saaro dekedda oo u geeyo biyo furan, Middle Harbor ama Pittwater waa waayo-aragnimo abaalmarin leh. Waxaad u badan tahay inaad soo qabato wax cabirkiisu qumman yahay xitaa haddii aadan sameynin, inaad doonta ku raacdo Sydney waa mid ka mid ah waaya-aragnimada weyn ee Sydney bilaha diiran.
Ku dhex lugee Gardens Botanic Gardens
Sydney waxay leedahay qaddar aad u badan oo cagaar ah, in badan oo ka mid ah waxay ku ag taal dekedda dhalaalaysa ama badweynta, sidaa darteed socodku waa hab fiican oo lagu soo maro beeraha nasashada ee magaalada, keydadka iyo dhul haraaga. Waxaa sidoo kale jira socod aad u weyn oo maraya aagaggii dhismay, taas oo kuu oggolaanaysa inaad iska hubiso qaab dhismeedka casriga ah ee magaalada iyo dhaxalka gumeysiga. Kuwa soo socdaa waa dhowr ka mid ah jidadka sida fiican loo yaqaan.
Wareeg Wareeg ah oo ku wareegsan. Ka bilow hoosta Buundada Sydney Harbor, ka dib la soco biyaha dekedda bidix ee ku yaal, hoos u dhex mar Dhagaxyada, dhinaca Wareega Wareegga, ilaa iyo hareeraha Sydney Opera House, hoos Jardiinooyinka Royal Botanic, iyo illaa muuqaalka cajiibka ah ee Opera House iyo Buundada Harbor ee Kursiga Mrs Macquarie. Qaar ka mid ah kala duwanaanshaha socodkan cajiibka ah ayaa, dad badan, astaanta u ah waayo -aragnimada Sydney. Si aad u hesho macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan socdaalka socod ee Xarunta Magaalada, oo daboolaya indha -indhaynadan (jihada ka soo horjeedda) iyo meelaha kale ee waaweyn, fiiri Socdaalka Socdaalka ee Sydney.
Dhamaan Buundada Harbor laga bilaabo Dhagaxyada dhinaca koonfureed ilaa Milsons Point dhinaca woqooyi (ama lidkeeda).
Xeebta Coogee ilaa Bondi. Ka dib xeebta bari ee la soo dhaafay dhowr ka mid ah xeebaha quruxda badan ee Sydney - joogso dabaasha haddii aad kululaato.
Ragga u tuf. Dhinaca hore ee Harbor Sydney.
Madaxa Bradleys. Dooni u qaado wershedda xayawaanka ee Taronga ka dibna u aad dhankaaga midig adiga oo raacaya promontory-ka. Waxaa jira dhul howd ah oo daahir ah (ku dhowaad aan isbeddelin xilligii gumaysiga Yurub), xeebo deggan, iyo aragtida garaacista dekedda oo dhan, bilaha diiranna waxaad ku arki doontaa biyo badan oo Riwaayado Bariga ah, nooc ka mid ah nacasyada waaweyn. Markaad gaarto cirifka madax-weynaha, waad ku laaban kartaa whar ama - haddii aad dareento hami badan - raac jidka dhowr kilomitir oo dheeri ah ilaa Clifton Gardens, adoo qurxinaya guryaha waaweyn ee jidka ku jira. Halkaas, waxaad ka raaci kartaa jidka dib ugu noqoshada Taronga ama waxaad bas ka raaci kartaa doonta doonta.
Rugby / Cagta Jiilaalka
Xilli ciyaareedka kubbadda cagta rugby-ga guud ahaan wuxuu ku bilaabmaa ciyaaro tijaabo ah bisha Febraayo, ka hor xilli ciyaareedka oo ku habboon bilowga bisha Maarso wuxuuna socdaa dhammaadka Sebtember ama horraanta Oktoobar. Xeerka kubada cagta ee ugu caansan Sydney waa horyaalka rugby (badanaa loo yaqaan 'kubbadda cagta' ama 'cagaha' dadka maxalliga ah - in kasta oo aan waligood kaliya 'rugby', oo loola jeedo midowga rugby). Sagaal koox oo ka socda tartanka qaran ayaa saldhigoodu yahay magaalada Sydney isboortiguna waa qeyb muhiim ah oo ka mid ah dhaqanka magaalada - kooxo badan ayaa ugu yaraan ciyaara qaar ka mid ah ku ciyaaraya garoonkooda meelaha ku dhow hareerahooda, tanina waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo lagu soo maro dhaqanka. wadnaha isboortiga.
Cayaaraha xagaaga ee xagaaga ee Sydney waa cricket, kaas oo aad ka heli doontid in lagu ciyaaro (qaab xoogaa wax laga beddelay) oo ku yaal xeebta iyo barxadaha magaalada oo dhan. Waxyaabaha xirfadleyda ah waxay inta badan ku saleysan yihiin Goobta Cricket-ka ee Sydney oo u dhow CBD: Imtixaanka sannadka cusub ee soo jireenka ah, ee u dhexeeya kooxda Australiya iyo koox kasta oo ajnabi ah oo xilligaas dalxiis ku socota, wuxuu bilaabmaa 3da Janaayo wuxuuna socdaa afar illaa shan maalmood. Xagaaga dambe, kulamada caalamiga ah ee hal maalin iyo / ama Twenty20-ka waxaa lagu qabtaa SCG. Tartamada maxaliga ah ee aasaasiga ah, oo ay ku tartamayaan kooxaha gobolka Ustaraaliya, waa Sheffield Shield (heerka koowaad), Ford Ranger Cup (hal maalin) iyo KFC Big Bash (Twenty20): badiyaa waa dad aan badnayn oo ka qayb gala waana ka raqiisan yihiin in la xaadiro marka loo eego caalamiga ah. Qaar ka mid ah kulamada hal maalin iyo Twenty20 ayaa lagu ciyaaraa garoonka ANZ Stadium ee ku yaal Olympic Park halkii lagu ciyaari lahaa SCG, laakiin garoonka cavernous ayaa aad uga liita dhulkii weynaa haddii aad runtii rabto inaad ku dareento dhaqanka ciyaarta kirikitka.
Baaskiil iyo kabaha
Bondi park skate
Cycle agagaarka Centennial Park ee Bariga Xaafadaha ama Bicentennial Park ee Sydney Olympic Park. Ama baaskiilka buurta buuraha adag ee ku xeeran jardiinooyinka, kaymaha iyo marinnada biyaha ee ku xeeran Sydney iyo iyada oo loo marayo baadiyaha xiisaha leh.
Sydney wax badan ayey leedahay qalfoof jardiinooyinka iyo fijaannada ku yaal hareeraheeda, iyo mid ka mid ah kuwa ugu caansan waa midka ku xiga Bondi Beach. Sydney sidoo kale waxay leedahay seddex guri barafka barafka Xarumaha, oo ugu dhow Xarunta Magaalada waa Macquarie Ice Rink ee aagga Macquarie Park-Ryde. Labada kale waxay u dhow yihiin saldhigga Canterbury iyo xiga Norwest ee Degmada Hills.
Sydney waxay leedahay seddex tiyaatar oo ganacsi oo waawayn kuwaas oo muujiya waxsoosaarka muusikada ee caalamiga ah, Masraxa Capitol gudaha Haymarket, ka Tiyaatarka Royal hoosta Xarunta MLC ee CBD iyo Tiyaatarka Lyric gudaha The Star casino complex ee Pyrmont Bay.
The Shirkadda Tiyaatarka ee Sydney (waxaa si farshaxanimo leh u agaasimay ilaa iyo 2013 kii Kate Blanchett oo hada uu ninkeeda Andrew Upton) waa shirkada ugu weyn tiyaatarka magaalada. Waxay soo saartaa barnaamij ballaadhan oo sanadle ah iyadoo la adeegsanayo Tiyaatarka The Sydney iyo labada tiyaatar ee Wharf ee Walsh Bay ee Dhagaxyada iyo mararka qaarkood Sydney Opera House Drama Theater sidoo kale.
The Tiyaatarka Belvoir St gudaha Surry Hills ee magaalada East East wuxuu mudo dheer adeer u ahaa Shirkadda Tiyaatarka ee Sydney, oo ah meel ay jilayaal da 'yar iyo agaasimayaal ilkaha kaga gooyaan kooxda la shaqeysa' B 'ka hor inta aysan u dhaqaaqin waxyaabo waaweyn. Waxay soo saartaa dhowr ciyaarood sannad kasta waxaadna ku wareegi kartaa foyerka kahor bandhigga oo aad arki kartaa inta magac ee Hollywood ee aad ka soo qaadan karto boodhadhkii wax soo saar ee hore.
The Tiyaatarka Isboortiga Kirribilli ee Waqooyiga Shore Hoose (oo kaabiga ku haysa Harbor Bridge) waa shirkadda ugu da'da weyn Sydney ee xirfadlayaasha ah ee hadhay waxayna sidoo kale soo saartaa barnaamij buuxa oo riwaayadeed ah sannad kasta, oo inta badan lagu soo bandhigo aqoonyahanno caan ka ah waddanka Australia.
Waxa kale oo jira tiyaataro tiro yar oo riwaayado ah oo lala leeyahay shirkado ku yaal Sydney oo ay ka mid yihiin Masraxa Cusub magaalada Newtown ee Galbeedka Gudaha, ka Shirkadda Tiyaatarka ee Griffin Tiyaatarka xayeysiinta ee SBW ee kuyaala King Cross oo kuyaala Magaalada Bariga iyo Tiyaatarka Darlinghurst gudaha Potts Point ee Magaalada East.
The Xarunta Seymour (qayb ka mid ah Jaamacadda Sydney oo ka baxsan Broadway oo ku taal Wadada Magaalada) waa dhisme ka kooban dhowr tiyaatar oo cabirkoodu dhexdhexaad yahay oo ay soo kireysteen wax soo saar badan oo madax bannaan iyo dalxiis sannadka oo dhan. Sidoo kale waa guriga Dakhliga Jaamacadda, badanaa badiyaa Ogosto ilaa Sebtember, taxane majaajilo majaajilo ah iyo bandhigyo muusig oo ay soo bandhigeen ardayda kuliyad kasta oo ka tirsan Jaamacadda. Mararka qaar meel lagu arko hibada mustaqbalka, qorayaashii hore ee caanka ahaa iyo soo bandhigayaasha dib u eegista waxaa ka mid ahaa Clive James iyo Germaine Greer.
Masraxa hiwaayadda, gaar ahaan tiyaatarka muusikada, wuxuu ku soo badanayaa magaalada Sydney, in ka badan 30 shirkadood oo masraxa muusikada hiwaayadda ah oo bixiya habeen madadaalo ah oo tiyaatarka ah oo ku dhow $ 20 tikidh kasta oo ka baxsan xaafadaha. Hubi ah Tiyaatarka Webiga gudaha Parramatta, the Tiyaatarka Zenith ee Chatswood ee Xeebta Waqooyiga Hoose, ee Xarunta Madadaalada ee Sutherland gudaha Sutherland iyo Tiyaatarka Glen Street gudaha Belrose ee Xeebaha Waqooyiga. Intooda badan tiyaataradaani waxay sidoo kale soo bandhigaan wax soo saar xirfadeed safar marmar ah.
Wixii taageerayaasha muusikada caadiga ah, ka Kooxda Heesaha ee Sydney waxay soo saartaa xilli ciyaareed ballaaran oo sanadle ah waxayna ugu horraysaa ka qabataa Hall-ka Concert Hall ee Sydney laakiin mararka qaarkood waxay kaloo ku ciyaaraan Hall Hall Recital Hall.
The Orchestra Rugta Australiya sidoo kale waxay soo saartaa barnaamij sanadle ah oo balaaran, badiyaa waxaa lagu qabtaa Hall Hall Recital Hall laakiin mararka qaarkood sidoo kale Sydney Opera House.
The Sydney Conservatorium of Music wadada loo yaqaan 'Macquarie Street' waxay inta badan marti gelisaa bandhig faneedyo ka yar Hall-ka Verbruggen oo ku dhexyaala dhismaha.
Haddii aad ku sugan tahay Sydney xagaaga bisha Janaayo fiiri xafladaha waaweyn ee bannaanka ee ay qabtaan Sydney Symphony Orchestra iyo Opera Australia ee 'The Domain' oo qayb ka ah sannadlaha Dabaaldega Sydney. Riwaayadahaas bilaashka ah waxaa inta badan ka soo qayb gala in ka badan 60,000 oo qof.
Opera Australia, Shirkadda qaranka ee Opera ee fadhigeedu yahay magaalada Sydney, waxay sanad kasta ku qabataa Sydney Opera House oo ku taal Xarunta Magaalada.
The Balletka Australia waa shirkadda baletiga qaranka Australiya. In kasta oo saldhigeedu yahay Melbourne haddana waxay u kala baxdaa xilli-sannadeedkeeda magaaladaas iyo Sydney Opera House.
Saldhigga goobta lagu caweeyo ee u dhow Wareegga Quay waa goobta ugu da'da weyn uguna caansan Sydney. Waxay soo bandhigtaa qaabab kale oo muusig ah sidoo kale laakiin waxay leedahay sumcad maadaama meesha ay ka dhacaan dhammaan ficilada jazz-yada waaweyn markay magaalada joogaan.
Ururka Muusigga ee la Kordhiyay ee Sydney (SIMA) wuxuu leeyahay jazz joogto ah Sawaxanka Codka goobta ku taal Xarunta Seymour (qayb ka mid ah Jaamacadda Sydney oo wax yar u jirta Broadway oo ku taal Wadada Magaalada). 505 goobta Surry Hills waxaa ku jira jazz nool 6 habeen usbuucii iyo Macdanta616 Ultimo waa goob kale oo heegan ah. Qaar badan oo ka mid ah baararka yar-yar ee ku teedsan gudaha magaalada Sydney waxay soo bandhigaan bandhigyo jazz yar yar habeen kasta.
Tilmaamaha ugu weyn ee bandhig faneedyada Sydney waa Spectrum kor u qaadid, oo aad ka heli doontid daabacaadda mugga leh ee Sabtida Subaxnimadii Sydney Morning Herald. Waxay ka kooban tahay dib u eegis iyo astaamo ku saabsan dhammaan waxyaabaha dhaqanka iyo sidoo kale liisas dhammaystiran oo xagga dambe ah.
Sydney waxay leedahay filimo guud oo lagu muujiyo dhismayaasha shaneemooyinka shaashado badan oo kuyaala agagaarka Sydney, oo ay kujiraan Xarunta Magaalada iyo Moore Park. Labada shirkadood ee ugu waawayn waa shineemooyinka Dhacdooyinka iyo Hoyts. Arthouse, ama filimo badan oo mugdi ku jiro, iskuday shineemooyinka Chauvel, Verona iyo Academy Twin shineemooyinka oo kuyaala wadada Oxford Street ee magaalada East East, ama Dendy oo udhow Opera House oo kuyaala City Center ama Newtown, ama Cinema Paris oo kutaala Madadaalada Fox Studios at Moore Park oo ku taal Magaalada Bariga Magaalada. Qaar badan oo ka mid ah dhismooyinka filimada waa weyn waxay bixiyaan qiimo jaban iyo adeegyo.
Waayo-aragnimo ka duwan, ka fiirso shineemooyinka hawada furan ee Royal Botanical Gardens ama Centennial Park. Waxaa jira hal filim oo wadis ah oo bidix uga furan Sydney, Blacktown ee Galbeedka Galbeed.
The Tiyaatarka IMAX, kaas oo bixiya waayo-aragnimo filim oo leh shaashadaha shineemo ee ugu weyn koonfurta kororka ee Darling Harbor.
Sydney waxay hoy u tahay xaflado waaweyn iyo kuwo yaryar iyo dhacdooyin taariikheed sanad kasta. Ku taxan taariikh ahaan kuwani waa:
Dabaaldega Sydney (Bandhigga Sydney). Bandhig faneed ujeedkiisu yahay inuu ahaado mid caalami ah oo la gaari karo, laguna martiqaado farshaxanno caalami ah oo caan ah inay soo bandhigaan shaqadooda ama ay ku qabtaan Sydney. Tiro ka mid ah dhacdooyinka dibadda ee bilaashka ah ayaa lagu qabtaa xafladda oo ay ku jiraan kuwa aadka loo jecel yahay Jazz ee Domain, Symphony ee Domain, iyo Fiidkii Habeenkii Koowaad. Riwaayado lagu qabtay Domain iyo Hyde Park oo ku yaal Bartamaha Magaalada. Ku Dabaaldegii Bacardi Laatiin ee Darling Harbor waxaa la qabtaa horraantii Janaayo iyada oo qayb ka ah Bandhigga Sydney, waxaana ku jira toddobaad usbuuc qoob-ka-ciyaarka Latin iyo muusigga ah.
Maalin Weyn. Bandhig-faneed ballaaran oo musiibo ah oo Australia oo dhan ah oo leh dhinac qoob-ka-ciyaarka ah, ayaa u ciyaara ilaa 60,000 oo ah Sydneysiders markiiba hal ama laba maalmood dhammaadka Janaayo (caadiyan maalmaha Janaayo 26-keeda). Falalkii hore waxaa ka mid ahaa Nirvana, Red Chili Peppers, Rage Against The Machine, Muse, Walaalaha Kiimikada iyo Marilyn Manson oo ka yimid dibada, iyo Powderfinger, Regurgitator iyo Gerling oo ka yimid Australia. Waxay caadi ahaan iibisaa maalinta tikidhada la sii daayo.
Xafladii Laneway ee St. Jerome. Bandhig faneed / indie ah oo muusig ah oo la qabto Janaayo / Febraayo sanad kasta (eeg bogga loogu talagalay taariikhaha soo socda), halkaas oo ay kooxuhu ku ciyaaraan jidadka magaalada dhexdeeda ah, xafladani waa jawi iyo jawi u gaar ah. Bandhigu wuxuu soo jiitaa fanaaniinta caalamiga ah iyo kuwa gudaha, oo ay kujireen fanaaniinta sida Feist, Architecture in Helsinki iyo Born Ruffians. Haddii aad xiiseyneyso kaqeybgalka 'Sydney' dhulka hoostiisa 'ama goobta kale / indie, xafladan waa bilow wanaagsan.
Bandhigga Sydney Fringe. Waxay kuxirantahay farshaxanka farshaxanka qaab filim, TV, waxqabad iyo isboorti.
Chinese sanadka cusub. Waxaa si ballaaran u dabaaldegay bulshada Shiinaha ee Sydney, iyadoo Xarunta Damaashaadyadu ay ku taal Chinatown. Iska ilaali qoob -ka -ciyaarka Libaaxa, tartamada Dragonboat ee Darling Harbor, iyo dabcan cunno badan oo wanaagsan.
Bandhig Faneed Faransiis Faransiis ah (Isbahaysiga Francaise French Film Festival). Waxay bixisaa aragti qurux badan oo hami sare leh oo ku saabsan shineemo Faransiis ah, oo lagu daawado filimada Palace Academy Twin ee Oxford St, Darlinghurst, Verona ee Paddington & Norton Street ee Leichhardt.
Bandhig Faneedka Jarmalka ee Sydney (Bandhiga Audi ee Filimada Jarmalka ee Australia). Waxay muujineysaa filimada Jarmalka casriga ah.
Nalalka Vivid Sydney
Sydney oo cad. Dhismaha taariikhiga ah iyo taariikheed ee Sydney ayaa iftiimay. Aragtida ugu fiican ayaa ku wareegsan Quay Circular oo leh Opera House oo samaysa shiraac gaar ahaan cajiib ah. Martin Place waxaa ka buuxa bandhigyo iftiin iyo goobo cunto. Nawaaxigeeda waxay kaloo leeyihiin bandhigyo iftiin yar, oo ay ku jiraan Xarumaha Chatswood iyo Parramatta. Bilaash.
Biennale ee Sydney. Bandhig faneed casri ah iyo farshaxan warbaahin badan oo la qabto xilliga qaboobaha xitaa sannado la tiriyey.
Bandhig Faneed Sydney. Waxaa lagu soo bandhigayaa in ka badan 200 oo filim 16 maalmood gudahood, oo ay ku jiraan tiro aad u tiro badan oo filimada Australiyaanka ah, oo badankoodana lagu soo bandhigi doono xafladda.
Bandhigga Filimka Carabiga. Waxay ku muujineysaa daraasiin filim toddobaad ka badan Parramatta.
Dhagaxyada Udgoonka Udgoonka. Xushmad u ah jacaylka Sydney ee kafeega inta lagu jiro maalinta qabowga qabow. Kuwo badan oo farshaxanno qaxwaha lagu iibiyo ah ayaa ku yaal dhammaan aagga Dhagaxyada. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Bandhigga Filimka Talyaaniga ee Lavazza. Waxay soo bandhigeysaa filimada ugu fiican ee shineemooyinka Talyaanigu bixiyaan, iyadoo laga soo qaadayo filimo casri ah xafladaha caalamiga ah ee Rome International ilaa xafladaha aadka loo aasaasay sida sharafta leh ee Berlinale iyo kan caanka ku ah aduunka ee Cannes Film Festival; iyo xulitaankii Classik Talyaani oo laga soo xulay kaydadkii Cinecittà Studios ee Rome.
Bandhigga Filimada dhulka hoostiisa mara ee Sydney. Barnaamijyada dabbaaldeggu waa mid gaar ah, filimo madaxbannaan oo tayo leh oo ka tallaabaya sida wax u socdaan isla markaana u babac dhigayaan heshiisyada muxaafidka ah ee filim sameynta. Bandhigu wuxuu u heellan yahay dib-u-cusbooneysiinta xiisaha maxalliga ah ee filim madax-bannaan iyo tijaabo ah oo qayb ka ah dhaqanka filimada dhulka hoostiisa mara oo ujeedkiisu yahay in la beddelo dhaqan xidid u ah qanacsanaanta shineemooyinka iyo soo noolaynta xamaasadda shineemooyinka.
Jeclaan Sydney. Waxay soo bandhigtaa makhaayadaha ugu wanaagsan magaalada, kuugga dhallinta yar ee la aasaasay oo imanaya, dhaqanka cuntada iyo khamriga. “Koofiyaduhu waa cashooyinka”, suuqyada habeenkii ee noodle ee Hyde Park, iyo xiisadaha cunto karinta ee gacanta. Dabaaldegyada cuntada iyo suuqyada agagaarka Sydney
Bandhig Faneedka Musica Viva. Bandhigga muusikada qolka koowaad ee Sydney. Bandhigu wuxuu soo bandhigayaa iid hodan ah oo farshaxanno iyo hanti muusig ah oo ay ciyaaraan qaar ka mid ah xirfadleyda adduunka ugu fiican, oo ay dhexgaleen muusikada tooska ah ee dhaqamada kala duwan.
Naqshad ku samaynta Badda. Ku soo biir tobanaan kun oo ka mid ah bahda Sydneysiders oo iyagu socod tamashle ah ku maraya inta udhaxeysa Bondi Beach iyo Tamarama Beach si aad ugu bogaadiso sawirada faraha badan ee nolosha ka weyn ee laga sameeyay labada xeebood iyo socodka. Keen kamarad si aad uga qaadatid dhacdooyin layaableh oo cajiib ah.
Ku calaamadee dhamaadka sanadka rashka cajiibka ah
Bakhtiinta guriga. Bandhig dhagaxa/beddelka/qoob -ka -ciyaarka oo ay ka muuqdaan falalka Australia oo kaliya. Waxaa lagu qabtaa Domain -ka Bartamaha Magaalada.
Carols in Domain ah. Sanad walba lagu qabto Domain -ka Xarunta Magaalada Sabtidii la soo dhaafay ka hor Kirismaska. Wuxuu soo jiitaa ku dhawaad ​​100,000 oo qof (markaa qorshee inaad hore u tagto meel wanaagsan) iyadoo shumacyadu la heesayaan marka habeenku dhaco
Maalinta Sanadka Cusub. Waxay soo bandhigtaa bandhigyo ballaaran oo pyrotechnics ah oo ku wareegsan Sydney Harbor iyo Bridge Bridge (oo ay ku jiraan rashka laga soo toogtay buundada lafteeda). Waxaa jira laba bandhig, "bandhig qoys" 9PM, iyo rashka waaweyn ee la soo bandhigo saqda dhexe. Isla markiiba ka dib 9PM Fireworks Qoyska, cajiib ah Harbor of Light Parade bilaabmaa. In ka badan 50 markab ayaa marin aad u qurux badan ka sameeya wareega 15km ee ku teedsan Marsada, iyagoo wata astaamo iftiiminaya oo matalaya mowduuca sanadka cusub ee Sydney, oo ka dhalaalaya hareerahooda ama qafisyadooda. Qaar badan oo ka mid ah hudheelada iyo baararka ku dhow dhow Harbor waxay qabtaan xaflado gaar ah oo leh qarash aad u sarreeya, iyo doonyaha dalxiisyada ayaa lagu iibiyaa qiimo sare. Ama goor hore u gal beddelka bilaashka ah oo leh farmaajo, miraha, khamriga, bustaha xafladaha iyo asxaabta qaar xagaaga xagaaga oo diiran. Keydso xoogaa naxariis ah oo ilma-adeerrada Waqooyiga Hemisphere oo dhaxanta ku joogaya Times Square iyagoo sugaya dhammaan xiisaha kubbadda oo dhawr mitir u jirta.
Waad qaadan kartaa fasalo luuqadeed, waxaad ku biiri kartaa koox buugaagta lagu qaxweeyo, waxaad baran kartaa sawir qaadista, waxaad iska diiwaan gelin kartaa socod socod taariikhi ah ama cunto, ama waxaad ka qaadan kartaa fasalo kombiyuutar ama ganacsi Maktabada Magaalada Sydney, halkaas oo aad iska diiwaan gelin karto si aad buugaag uga amaahato ama aad joornaalada ugu aqriso sidoo kale kafee.
Si la yaab leh maahan inay tahay magaalada ugu weyn Australia, Sydney waxay hoy u tahay jaamacado badan. Laba ka mid ah jaamacadahaas, ayaa ah Jaamacadda Sydney iyo Jaamacadda New South Wales waa qayb ka mid ah magaca "Kooxda siddeedaad". Waxaa jira fursado ardayda caalamiga ah ay iskaga qoraan jaamacadahaan, ama barnaamijyadooda shahaadada ama heshiisyada isdhaafsiga ee jaamacadaha ajnabiga ah. Kuwani waxay ajaanibta siinayaan fursad aad u fiican oo ay ugu noolaadaan magaalada Sydney muddo dheer.
Sida Australia inteeda kale, xafiisyada sarrifka lacagaha waxay ku shaqeeyaan suuq bilaash ah, iyo qolka yar ee sarrifka ah ee ku habboon ee aad ku dhaafto George Street, ee Opera House ama garoonka diyaaradaha ayaa ka qaadi kara 15% ama ka badan qiimaha ugu wanaagsan ee aad ka heli karto meelo kale . Sida had iyo jeer, hubi sicirka oo si taxaddar leh u shaqee. Ogow sicirka maanta oo diyaar u noqo inaad ka baxdo haddii qaddarka lacagta ay xisaabinayaan aysan ahayn sidaad filan lahayd. Bangiyada ayaa sida caadiga ah bixiya sicirro aad u wanaagsan, laakiin waa saacado ganacsi oo furan oo keliya maalmaha shaqada.
Waxaa laga yaabaa inay kuugu fiican tahay inaad ku bixiso kaarka amaahda oo aad u isticmaasho ka bixitaanka ATM-ka oo aad haysato hubaal inaad heleyso sicirka iyo khidmadaha uu bangigaagu bixiyo.
KVB Kunlun, 18F, Citigroup Center, 2 Park St. Shirkadan weyn ee ganacsiga badanaa waxay lashaqeysaa ganacsiyo iyo qadar fara badan laakiin waxay sidoo kale lacag ugu badashaan shakhsiyaad qadar yar leh. Waxay kaa qaadayaan $ 10 haddii aad ka beddesho $ 2,000 laakiin qiimahoodu aad ayuu u tartamayaa oo wali waa mudan tahay in halkaa loo aado iyada oo la beddelayo dhowr boqol. Waxay leeyihiin illaa iyo hadda heerka ugu fiican ee Sydney. Diyaar u noqo inaad sugto sida dadka safarka ah qaarkood u soo tebinayeen inay halkaa ku sugnaayaan wax ka badan saacad. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Dukaamada waawayn iyo bakhaarrada khaaska ah waxay furan yihiin 9ka subaxnimo waxayna xidhmaan qiyaastii 6PM, waxay furan yihiin ilaa 9PM Khamiista. Axadda filo inay ka furmaan agagaarka 10 -ka subaxnimo agagaarkeeda, iyo qiyaastii 11 -ka subaxnimo ee bartamaha magaalada, oo ay xirmaan 5PM. Waxaa jira meelo yar oo aad ka heli doonto dukaamo waxyar ka dib furmaya, sida Darling Harbor oo furan ilaa 9PM toddobaad kasta.
Dukaamada waaweyn ayaa furnaan doona laga bilaabo 6-da subaxnimo ilaa saqda dhexe.
Dukaamo badan oo ku habboon, makhaayado cunto-dhakhso leh iyo kaalmo shidaal oo ku dhex yaal aagga metro Sydney ayaa furan 24 saacadood maalintii.
Bangiyadu badanaa waxay furmi doonaan oo keliya maalmaha shaqada, iyada oo kaliya laan marmar ah la furo subaxa Sabtida. Wakiilada safarka (oo aysan ku jirin wakiilada ballansashada ee meelaha dalxiiska) waxay xirmaan Axadaha.
Waxyaabahaas xusuusta leh ee Aussie - koalas cufan iyo kangaroos, noocyo kala duwan oo "Australiana" knick-knacks - waxaa laga heli karaa dukaamo xusuus ah oo ku wareegsan magaalada, iyo sidoo kale dukaamada garoonka diyaaradaha. Farshaxanada Aborijiniska / dhaqanka asaliga ah iyo farshaxanka, sida sawir gacmeedyada, didgeridoos gacmeed lagu sameeyay, waa qaali, baaxadda ku taal Sydney aad bey uga yar tahay Alice Springs. Kuwa kaliya ee doonaya inay gurigooda u qaataan wax la mid ah, xusuus ahaan safarkoodii Australia, waxay aadayaan Suuqyada Paddy ee aagga Haymarket ee dhamaadka koonfurta magaalada. Suuqyadu sidoo kale waxay iibiyaan waxyaabo badan oo xusuus ah oo ka qiimo badan dukaamada xusuusta caadiga ah. Dukaammada Dollarka (eeg “Cuntada iyo Waxyaabaha Muhiimka ah” ee hoose) sidoo kale waxay ku iibiyaan xusuusta qiimaha gorgortanka-hoose, inkasta oo tayo ahaan aad hoos u dhacday.
Qaabka gaarka ah iyo hal-abuurnimada Australia waxay la micno tahay in Sydney ay horumar ka samaynayso wareega caalamiga ah, maadaama naqshadaha Australiyaanka ah sida Wayne Cooper, Collette Dinnigan, Akira Isogawa, Lisa Ho, Oroton iyo Easton Pearson lagu arko adduunka oo dhan. Xaqiiqdii, kudhowaad 60 sumadaha Australiya ayaa u dhoofinaya naqshadooda naqshadaha dukaamada iyo dukaamada waaweyn ee Aasiya, Yurub iyo Mareykanka.
Meelaha ugu badan ee dharka iyo alaabada lagu iibiyo ayaa laga heli karaa qeybta woqooyi ee CBD, laga bilaabo xaafadda Town Hall, oo hagaagsan Dhismaha Queen Victoria.
Dhismaha Queen Victoria. Magaalada dhexdeeda waxaa ku yaal dhisme caan ah, si qurux badan loo dayactiray, qarnigii 19-aad dhismaha dhagaxa, oo ay ku yaalliin in ka badan 400 oo dukaanno ah. Dukaamada dhismaha kuyaala waxaa loo dhigay qaab jaranjaro ah - macno ahaan. Heerka sagxadda hoose wuxuu leeyahay dukaamo raqiis ah, oo aan caadi ahayn oo leh barxadda cuntada, silsilado calaamadeysan oo heer dhexdhexaad ah iyo heerka 3 ayaa ah halka ay ku yaalliin naqshadeeyayaasha Australia ee kala duwan, qaar ka mid ah calaamadaha yurub iyo dukaamada kabaha Talyaaniga. Waa mid ka mid ah qaab dhismeedka qaab dhismeedka sawirada badan ee Sydney. Waxay ku taalaa George St oo ku dhegan Town Hall iyo Pitt St Mall.
Arcade The Strand. Bartamaha Magaalada ayaa weli ah qurux aad u qurux badan oo ku dhex jirta buuqa iyo buuqa CBD ee Sydney. Tafaariiqleyaal badan oo ay ka mid yihiin The Shop Shop, Elie's Leather Repair iyo Strand Hatters ayaa ka ganacsanayey tobanaan sano, iyagoo noqday hay'ado caan ah oo Sydney ah. Maanta Xaruntu waa isku -darka gaarka ah ee Australia iyo naqshadeeyaha Caalamiga ah (oo ay ku jiraan Alex Perry, Akira, Lisa Ho iyo Alannah Hill) iyo dukaamo khaas ah oo u adeegta macmiil casri ah oo casri ah.
Wadada Castlereagh Magaalada dhexdeeda waxaa ku yaal dukaamo badan oo ka mid ah kuwa ugu qaalisan Yurub ee calaamadaha yurub iyo dukaamada dahabka. Waxay sidoo kale hoy u tahay bakhaarka weyn ee silsiladda dukaanka waaxda Australia David Jones.
Dukaamada waaxda. Kaliya labo ka mid ah ayaa ku yaal Xarunta Magaalada, Myer iyo David Jones, oo ku yaal ficil ahaan midba midka kale deriskiisa meel u dhow Pitt Street Mall, oo ay ku soo biiraan lugta lugta ee lugta lugta leh ee dhulka kore. Labaduba waxay bixiyaan badeecadahaaga kala duwan ee alaabta-dukaanka caadiga ah.
Wadada Pitt Street waa suuq laga dukaameysto oo ku yaal Bartamaha Magaalada. Waa hal baloog oo u dhexeeya Suuqa Suuqa iyo King Street waana mid ka mid ah waddooyinka wax iibsiga ee ugu qaalisan adduunka. Dhammaan dhinaca bari ee xayndaabku wuxuu ka kooban yahay Westfield Sydney mall (oo ay ku jirto Sydney Tower) iyo dhinaca galbeed sidoo kale waa Xarumo wax -iibsi oo taxane ah.
Oxford Street dhanka bari ee magaalada waxaa ku yaal dukaamo, baarar iyo goobo lagu caweeyo. Qeybta udhaxeysa Taylor Square iyo Queen St, Woollahra waxay si gaar ah ugufiican tahay naqshadayaasha moodada Australiya iyo dabaqadaha dhamaadka-dhexe. Qaar ka mid ah dukaamadaan iyo kuwa kale ee tafaariiqleyda ah ayaa ku iibiya Suuqyada Paddington, kuwaas oo lagu qabto barxadda dugsiga guud ee Paddington maalin kasta oo Sabti ah laga bilaabo 10-ka subaxnimo.
Wadada Queen Woollahra sidoo kale bariga magaalada waa meel laga dukaameysto oo dukaamo heer sare ah leh, dukaamo cunto iyo alaab guryaha lagu gado.
King Street, Newtown galbeedka gudahiisa waxaa ku yaal dukaanno dheer oo jaban oo dukaamo qaali ah, iyo dukaanka silsiladaha aan caadiga aheyn, oo leh meelo badan oo lagu joojiyo qaxwada ama khamriga wadada lagu sii wado!
Xarumaha Dukaameysiga. Waxaa ku yaal dhowr xarumo ganacsi oo waaweyn agagaarka Sydney ee Bondi Junction, Chatswood, Parramatta, Macquarie Park, Hurstville iyo Miranda, iyo waliba Warringah Mall. Bondi Westfield waxay bixisaa waayo-aragnimada ugu sarreysa, oo leh astaamo badan oo Yurub ah oo la heli karo.
Xarumaha warshadaha. Birkenhead Point iyo DFO ee Inner West waxay leeyihiin magac sumadeed qiimo jaban. Suuqa Magaalada ee magaalada Chinatown sidoo kale wuxuu leeyahay warshado yar oo warshado yar yar ah.
Cuntada iyo waxyaabaha daruuriga ah
Qiimayaasha ayaa ku sii batay dukaamada raaxada iyo meelaha dalxiiska, waxaana mudan in la raadiyo suuqyada waaweyn - xitaa Bartamaha magaalada. Ugu weyn Silsiladaha Supermarket-ka magaalada Sydney waa Woolworths, Coles waa bedel ka raqiisan, laakiin ku kooban xaafadaha. Cunnada Xalaasha ah waa inaad booqataa qaar ka mid ah Bakhaarrada Cuntada Aasiya.
Kaararka boosta ayaa ugu qaalisan xafiisyada boostada (75c) ama dukaamada qiimo jaban. Raaxada iyo dukaamada xusuusta waxay iibin karaan kaarar aad u tiro badan (oo ka qaalisan), laakiin guud ahaan ma iibiyaan tigidhada. Shaabad dibadda ah oo loogu talagalay kaarka boostada ayaa ku kacaysa $ 2.60.
Kuwa ka dambeeya khibradaha cunnooyinka ee dhaqamada kala duwan, waxaa jira “degmooyin cunno” u gaar ah oo ku baahsan magaalada weyn. Noocyada kala duwan ee cuntada ee la heli karo waa kuwo aad u tiro badan oo qasab maahan inay qaali yihiin. Badanaa waa suurtagal in la helo makhaayad jinsiyad kasta leh, oo ku takhasustay ku dhowaad nooc kasta oo cunno ah.
Ashuur ee Fairfield iyo Fairfield Heights, ee Galbeedka Galbeedka Sydney, Ware Street iyo Smart Street.
Indian mid ka mid ah maqaayadaha ku yaal Galbeedka Dibedda oo leh dhammaan noocyada cunnada Hindida (Waqooyiga Hindiya, Koonfurta Hindiya, khudradda, hilibka, iwm).
Indonesia gudaha Anzac Parade, Kensington, Kingsford & Maroubra.
Kosher ee Bondi. Makhaayado badan oo waaweyn oo aagga oo dhan ah.
Lubnaan wadada Cleveland Street. Baba Ghanouj, Lahem Bilow iyo Baclawa halkan. Lubnaan ahaan ugufiican, u bax deegaanka Bariga Dhexe ee Greenacre ama Lakemba.
turkish gudaha Auburn. Magaalada u dhow, waxaa isku day Enmore Road Enmore / South King St Newtown ee Inner West. Halkan ka hel Sucuklu iyo Pastirmali.
Soomaali wadada Dixon Street, Haymarket (Chinatown) - cunno kulul, dhadhan macaan oo ka timid gobollada Turkic ee Bartamaha Aasiya.
Qaar badan oo ka mid ah meelaha aan kor ku soo sheegnay ayaa sidoo kale iibiya wax soo saarka la xiriira dhalashada asalka ah ee dadka deegaanka.
Khudaarta iyo cuntooyinka gaarka ah
Khudradleyda ayaa si wanaagsan loogu talagalay. Makhaayad kasta waxay badanaa yeelan doontaa ugu yaraan hal saxan oo khudradeed ah. Makhaayadaha Hindida waa lagu kalsoonaan karaa si loo helo xulasho ballaaran. Bariga Sydney iyo Inner West hareeraheeda waxay leeyihiin xulashooyin badan, Cabramatta xaafadaha galbeedka waxay leeyihiin makhaayado badan oo Buddhist Aasiya ah oo vegan iyo khudradeed leh.
Waxaa jira wacyigelin ku saabsan cunnooyinka aan lahayn gluten-ka iyo caano-la'aanta caanaha ee Sydney, mar labaadna inta badan hareeraha magaalada hareeraheeda waxay u badan tahay inay daboolaan cuntooyinkan.
Tilmaamaha Cuntada Wanaagsan, oo ay daabacday Sydney Morning Herald, waa hage makhaayad si wanaagsan loo tixgeliyo oo ku saabsan wareegga cuntada ee Sydney. Tilmaamuhu wuxuu adeegsadaa nidaam dib u eegis iyo dhibco qaadis la mid ah daabacadaha Michelin ee dibada. In kasta oo maqaayadaha ugu badan ay ku jiraan Sydney, haddana makhaayado badan oo gobolka ah oo NSW ah ayaa iyaguna ku jira. GFG waxaa laga soo qaadan karaa bakhaar kasta oo wanaagsan oo buugaag ah sidoo kale waxaa loo heli karaa in lagu soo dejiyo sida codsi iPhone ah, oo leh ikhtiyaarro bil kasta ama sanadle ah.
Waqtiga laga baxayo Sydney wuxuu leeyahay qayb caadi ah oo ku saabsan cunista banaanka Sydney, iyadoo xoogga la saarayo meelaha la awoodi karo. Waxaa jira daabacaad warqad ah iyo sidoo kale degel websaydh ah.
Caga-jilicsanaanta iyo runti wanaagsan, bogagga dhalaalaya ee joornaalka Gourmet Traveler waxay daboolayaan qaabkii ugu dambeeyay ee cunnada Sydney iyo goobta makhaayadaha ee caanka ah.
Eatability.com iyo Urbanspoon waa degello la mid ah Yelp! gudaha Mareykanka, oo ay kujiraan dib u eegista iyo qiimeynta maqaayadaha dad weynaha.
Halkee laga joogaa Sydney
Sydney waxay ku leedahay boqolaal ikhtiyaar oo hoy oo ku yaal aagga badhtamaha Sydney si loo tixgeliyo, laga bilaabo hudheellada gadaasha ilaa hudheellada xiddigta leh ee leh dekedda iyo aragtida Opera House. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira ikhtiyaarro ka baxsan Xarunta Magaalada sidoo kale.
Haddii aad u safreyso ganacsi, waxaa laga yaabaa inay jiraan hoy qaab ganacsi u dhow meesha aad ka shaqeyso, inta badanna looma baahna inaad sii joogto magaalada. Waxaa jira xulashooyin ku saabsan aagagga ganacsiga garoonka diyaaradaha ee Koonfurta Sydney, agagaarka Macquarie Park ee Waqooyiga Galbeed, iyo Parramatta.
Haddii aad la safreyso gaari, ka dibna helitaanka meel aad dhigato, iyo gelitaanka iyo ka bixitaanka magaalada waxay noqon kartaa dhib. Wadada weyn ee Hume ee kutaala magaalada Sydney ee South West waxay leedahay motello caadi ah oo wadada dhinaceeda ah halkaasoo aad dhigan karto qolkaaga, saldhiga adeega ama ilaha cuntada degdega ah ee deriskaaga ah.
Haddii aad ku jirto kaam, xerada ugu dhow ee Xarunta Magaalada waxay ku taal Jasiiradda Cockatoo ee dekadda. Waxaad teendho ka dhisan kartaa Beerta Qaranka ee Lane Cove, oo wax ka yar 10km u jirta Xarunta Magaalada, qiyaastii 750m u jirta saldhigga tareenka ee Waqooyiga Ryde.
Haddii aad gasho xeebta, Manly iyo Bondi waa labada meelood ee iska cad ee la tixgeliyo. Laga soo bilaabo Manly 25 daqiiqo doonta waxaad ku leedahay Xarunta Sydney. Qaar ka mid ah xaafadaha yar ee la yaqaan waxay leeyihiin ikhtiyaarro hoy. Cronulla waxay leedahay hoy xeebta ku yaal, tas -hiilaad waana xaafadda kaliya ee xeebta ku taal ee Sydney oo leh saldhig tareen (45 daqiiqo u jirta magaalada hoose).
Sydney waxay leedahay hudheelo badan oo hudheello ah - degmooyin caan ah oo loogu talagalay kuwaan waxaa ka mid ah qeybta koonfureed ee CBD iyo Haymarket, Glebe iyo Kings Cross, Xaafadaha Bariga (Bondi, Coogee) iyo Xeebaha Waqooyiga (Manly).
Waxaad ka heli kartaa bixiyeyaal hoy badan oo heer dhexe ah gudaha CBD (badiyaa koonfurta Haymarket dhamaadka), iyo masaafo yar oo magaalada u jirta gaadiidka dadweynaha, oo ay ku jiraan North Sydney, Inner West iyo North Shore. Marmarka qaarkood hoy jaban oo qaab motel ah ayaa laga heli karaa waddooyinka gala magaalada Sydney, gaar ahaan Koonfurta Galbeed ee Sydney
Waxaa jira hoteelo raaxo leh oo laga heli karo dhamaan magaalada Sydney. Hoteellada ugu qaalisan guud ahaan waxay ku yaalliin CBD iyo degmada Rocks, oo u dhow xarunta ganacsiga ee Sydney, oo u dhow maqaaxiyo badan, oo badanaa lagu soo bandhigo aragtiyo deked qurux badan. Qaar ka mid ah hudheelada tayada sare leh waxay ku yaalliin Darling Harbor. Waxaad ka hubin kartaa liiska hoose meelo cayiman.
Fadlan booqo mid ka mid ah degmooyinka kala duwan ee Sydney ee lagu sharaxay qaybta Degmooyinka kor ku xusan si aad u aragto liisaska hoyga.
Guryaha laga adeegto ee Sydney
Guryaha adeega, muddada-gaaban ayaa si ballaaran looga heli karaa dhammaan magaalada Sydney waxaana loo heli karaa joogitaanno gaaban sida hal habeen. Waxqabadyada sida caadiga ah waxaa ka mid ah jikada, qasaaladda iyo qalajiyaha, iyo qolal jiif oo gooni ah. Guryo kaladuwan ayaa ka jira miisaaniyadda illaa shan-xiddigood.
Nabdoonow oo iska ilaali Khiyaanooyinka ka jira Sydney
Lambarka gurmadka ee Australia oo dhan waa 000, iyadoo adeegga ambalaaska, waaxda dab damiska iyo booliska laga heli karo lambarkan.
Ka feejignow dhibaatooyinka caadiga ah ee magaalada ka dhaca. Gaarigaaga xiro, oo alaabta qiimaha leh amaan ha ahaato ama ha qarsoonaato. Dadka dawarsada waxay weydiisan karaan lacag ama sigaar, laakiin guud ahaan waxyeello ma leh. Waxay badanaaba sameysan doonaan sheekooyinka caadiga ah ee ku saabsan u baahan tikidka tareenka iwm. Si fudud u dhah “Waan ka xumahay, maya” inta badanna keligay bay kaa tegayaan.
Sydney waxay leedahay qaar ka mid ah arrimaha dambiyada rabshadaha wata ee saameeya magaalooyinka waaweyn, si kastaba ha noqotee, guud ahaan, taxaddarro gaar ah looma baahna booqashada meelaha caadiga ah ee dalxiiska maalintii.
Inta badan weerarada ka dhaca Sydney waxay ka dhacaan gudaha ama agagaarka baararka iyo goobaha lagu caweeyo habeenkii, waxayna ku lug leeyihiin aalkolo. Badankood waxay ku lug leeyihiin ragga da'da yar sida dambiilayaasha iyo dhibbanayaasha Inta badan dhaca ayaa ka dhaca hareeraha hareeraha hareeraha, ama jardiinooyinka u dhow baararka iyo goobaha lagu caweeyo habeenkii. Kuwa ugu badan ee geysta ama dhaca waa daroogada balwada leh. Sababtaas awgeed, taxaddar hareeraha Kings Cross, The Rocks, Oxford St, iyo George St inta u dhexeysa Town Hall iyo Saldhigga Dhexe, gaar ahaan goor dambe oo habeenkii ah maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Ka fogow xarunta Redfern goor dambe habeenkii. Xitaa tareenada oo la beddelo xilli dambe habeenkii ayaa ugu wanaagsan in lagu sameeyo Bartamaha halkii laga sameyn lahaa Redfern. Haweenku waa inay taxaddar dheeraad ah ku yeeshaan baararka oo ay la socdaan wehel heegan ah, gaar ahaan aagga hudheellada dhexe, oo ay taxaddar ka muujiyaan cabbitaannada xardhan.
Meelaha qaar ee koonfur-galbeed iyo galbeedka Sydney waxay leeyihiin sumcad, guud ahaan lagu kasbaday warbixinnada wararka ee mootada iyo rabshadaha kale ee la xiriira kooxaha gaangiska ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad ku dhiirato aagaggan inta lagu jiro maalinta, ma jirto khatar gaar ah. Haddii aad qorsheyneyso inaad ka baxdo waddada dalxiis ee ku taal meel ka mid ah baararka hareeraha ama caweyska habeenkii si aad uhesho, raadso talobixin maxalli ah. Waxay noqon kartaa baarar wanaagsan, laakiin waxtar ayey leedahay in lagu wargeliyo. Aagagga ku xeeran saldhigyada tareenka waxay u muuqdaan kuwo ku bahoobay baandooyinka dhallinyarada ee Galbeedka Sydney, gaar ahaan habeennada Jimcaha iyo Sabtida. La joog shirkadda, oo ha ku lug yeelan.
Gaadiidka dadweynaha wixii ka dambeeya mugdiga
9PM ka dib, saldhigyada bannaanka ee yar yar waxay noqon karaan kuwo aad u xasilloon, qaar badanna gebi ahaanba waa shaqaale la'aan waqtigan ka dib. Tareenadu waxay kaloo noqon karaan kuwo madhan marka ay gaaraan dhammaadka khadka waqtigaan. Ha filan inaad tagsi ku sugayso saldhig kasta - kuwa waaweyn oo keliya ayaa lahaan doona darajo tagsi oo si fiican loo ilaaliyo. Dadka sakhraansan ayaa ku badan tareenada habeenkii goor dambe, gaar ahaan habeenka Jimcaha iyo Sabtida. Bartamaha magaalada, tareenadu waxay u muuqdaan inay mashquul yihiin ilaa fiidkii, dabeecadda xunna waxay ka badan tahay khatar kasta oo dhab ah.
Badbaadadaada awgeed, ku safro gaadhiga kuugu dhow qaybta waardiyaha, kaas oo ku calaamadsan nalka buluugga ah ee tareenka dibaddiisa. Haddii aad waligaa dareento inaad ka welwelsan tahay ammaankaaga tareen kasta, ama xitaa haddii aad la kulanto dhaqdhaqaaq ka dhan ah bulshada, waxaad wici kartaa 1800 657 926 si aad ula hadasho nabadgelyada, kaasoo mararka qaarkood kuu diyaarin kara roondo raaca tareenka si uu u fuulo tareenka oo u bixiyo gargaar. Waxaad kaloo caawimo ka dalban kartaa waardiyaha. Tareennada casriga ah, waxaad riixi kartaa badhanka aagga laga soo galo si aad ula xiriirto waardiyaha. Saldhig kasta oo tareenku wuxuu leeyahay dhibic gargaar degdeg ah oo oranji ah oo uu kormeerayo CCTV oo ku xiran amniga, badiyaa xagga Xarunta madal.
Basaska Nightride, oo beddela tareennada wixii ka dambeeya saqda dhexe, ayaa kuu diyaarin kara taksi kula kulmo markaad ka degto. Weydii darawalka.
Xeebta Bondi - AustraliaXeebta ugu caansan
Haddii aad aadeyso xeebta, qaado taxaddar la mid ah sida aad u sameyso meel kasta oo Australia ah. Eeg badbaadada xeebta Australia.
Waxa ugu weyn ee la xusuusto markaad ku dabaalaneyso xeeb kasta waa inaad ku dabaalataa inta u dhaxeysa calamada huruudda iyo casaanka. Calanadan ayaa ah meelaha ay ku sugan yihiin ilaalada nafta waxayna muujinayaan meesha ugu nabdoon ee lagu dabaalan karo xeebta iyada oo laga fogaan karo mawjadaha halista ah.
Sydney runti ma leh jellyfish khatar ah. Bluebottles (Bortuqiiska Man-Of-War) waa calallo buluug-guduud ah oo ku dhaca xeebta Sydney dhowr maalmood xagaa kasta, marka jihada dabayshu sax tahay. Waxay leeyihiin kaadiheysta hawo dul sabbaysa biyaha, iyo teendhooyin qodbaya. Badanaa hawo-haysta waxay ka weynaan kartaa shilimaad. Waxaad arki doontaa cadeyntooda iyaga oo wata boorsooyinkooda hawada lagu maydhay xeebta haddii ay joogaan. Waxay ku siin karaan xoqin xanuun badan - xitaa markay xeebta joogaan - laakiin qof walba kama celineyso biyaha. Codso xirmo kuleyl ah haddii aad karto, ama baraf, ama biyo cusbo leh. Sida ugu wanaagsan ee xanuunka looga saari karo waa in lagu socodsiiyo aagga ay dhibaatadu saameysey biyo aad u kulul oo aad istaagi kartid. Sabiibku waxtar ma leh. Mararka qaarkood jellyfish hufan oo yar ayaa ka muuqda dekedda iyo estuaries. Badanaa waad iska ilaalin kartaa koox kasta oo iyaga ka mid ah, laakiin inta badan waxyeello ma leh. Marar dhif ah oo jellyfish ka weyn ayaa ku yaal dekedda iyo estuaries kale. Haddii aad ku aragtid kuwan qalcadaha, waxaa fiican inaad ka fogaato jidkooda. Waxay u badan tahay inay tahay arrin ku saabsan barafka biyaha marka loo eego kuwa dabbaasha.
Xeebaha badweynta Sydney dhammaantood waxay leeyihiin shabagyadoodii mesh shark oo qiyaastii 100 mitir u jira badda, waxaana si joogto ah u ilaaliya hawada hareeraha. Qaylo-dhaanta 'shark' ayaa qaylin doonta haddii wax la arko, waana inaad ka baxdaa biyaha. Khatarta ah in lagu soo dabaasho xeeb xeebta u dhexeysa calamada ayaa hooseysa. Weerarada loo yaqaan 'Shark' ayaa dhif iyo naadir ku ah xeebaha Sydney, laakiin way dhaceen. Talada ayaa ah in laga fogaado in lagu dabaasho biyo mugdi ah dabeylaha kadib, ama makhribka ama waaberiga, iyo in lagu dabaalan karo guryaha isku xiran ee ku yaal dekedda iyo estuaries kale.
Booqo isbitaal ku yaal Sydney
Haddii aad u baahato ambalaas, wac 000.
Xarumaha Caafimaadka oo leh dhakhaatiir guud ayaa diyaar u ah xanuunnada yaryar iyagoon ballan ka haysan magaalada iyo nawaaxigeeda. Filo inaad sugto ilaa saacad ama wax ka badan si aad u aragto dhakhtar. Khidmadaha hore waxay badanaa ku dhow yihiin $ 75 wadatashiga caadiga ah ee 15 daqiiqo ah, Xarumaha badankooduna waxay aqbalaan kaararka deynta. Xarumo caafimaad oo badan ayaa furan ilaa 10PM ama wax la mid ah, in yarna waxay furan yihiin 24-saac. Kuwa haysta kaarka Medicare-ka Australia waxay Sydney ka heli doonaan Xarumo caafimaad oo badan oo ah “bulk-bill”.
Isbitaalada badankood ee magaalada Sydney waxay leeyihiin waaxyo deg-deg ah, laakiin hubi ka hor intaadan xaadirin maadaama qaarkood aysan sameyn. Waaxyadaas gurmadku waxay furan yihiin 24-saacadood. Ka eeg maqaalka Australia faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan eedeymaha caafimaadka.
Farmashiyeyaal badan ayaa furan kadib saacadaha shaqada caadiga ah, badiyaa waxay u dhow yihiin Xarumaha caafimaadka, waxaana jira kuwo yar oo furan 24-saac. Waxaad wici kartaa +61 2 9467 7100 si aad u hesho meesha kuugu dhow farmashiyaha saacadaha dambe.
Isgaarsiinta magaalada Sydney
Ka eeg tilmaamaha degmada Sydney wixii macluumaad ah ee deegaanka ah, ama hagaha Australia wixii xulashooyin ballaaran ah.
Qunsuliyadaha ku yaal Sydney
Masar, Heerka 3, 241 Commonwealth St, Surry Hills,, fax: + 61 2 9281-4344. 9 AM-3: 15PM.
France, Heerka 26 - Wadada Suuqa ee St Martins Tower 31.
Germany, 13 Trelawney Street, Woollahra,, fax: + 61 2 9327 9649.
Hindiya, 265 Castlereagh St, Sydney CBD,, fax: + 61 2 9231 2299. 8:30 AM - 3PM (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Indonesia, 236-238 Wadada Maroubra, Maroubra. Aagga xukunka ee New South Wales, Queensland, ACT, iyo South Australia
New Zealand, Heerka 10, 55 Hunter Street,, fax: + 61 2 9221-7836.
Xafiiska Dhaqaalaha iyo Dhaqanka ee Taipei, Suite 1902, Heerka 19 MLC Xarunta, King St.,, fax: + 61 2 9223-0086.
Boqortooyada Ingiriiska ee Ingiriiska & Waqooyiga Ireland, Heerka 16, Dhismaha Gateway, 1 Macquarie Place. 9AM - 1PM.
United States of America, Heerka 59, MLC Center, 19-29 Martin Pl,, fax: + 61 2 9373-9184. Hubso inaad adeegsatid xarumaha kahor intaadan marin amniga maadaama aysan jirin qunsuliyadda lafteeda. Waxa ku yaal dukaamo ku yaal suuqyada hoos ku yaal oo bixiya sawirro baasaboor iyo xafiiska boostada oo aad ka iibsan karto lacag hore loo sii siiyay, dabagal, baqshado.
Xarunta Dayactirka Shandadaha, 317 Sussex St. dayactirka adeegyada.
Wargeysyada. Sydney waxay leedahay laba wargeys oo waaweyn: The Sydney Morning Herald, oo loo tixgeliyo joornaalka magaalada ee rikoodhka, iyo populist, guud ahaan midig u janjeera dhinaca midig, The Daily Telegraph. Ka tagitaanka Herald waxay noqon kartaa hab wanaagsan oo fikrad looga helo waxa ka dhacaya magaalada, iyo isku dayga ah in la fahmo jahwareerka murugsan ee ah siyaasadda Sydney. Wakiillada wargeysyada ayaa sidoo kale kaydiya Australian-ka, oo ah war-baahin qaran oo midig u janjeera, iyo Dib-u-eegista Maaliyadeed ee Australiya, iyo sidoo kale hal ama in ka badan waraaqaha xaafadaha (inta badan toddobaadle, inkasta oo kuwa waaweyn ay marar badan daabacaan).
Waxaa jira dhowr safar wanaagsan oo hal ama laba maalmood ah oo ka socda Sydney:
U kaxee khadka Jidka Bell ee Wadada Buuraha Buluuga illaa Bannaanka Galbeedka. Ka soo iibso wax soo saar (tufaax, isteroberi, xabadka iyo berry) iibiyayaasha geedaha geedaha wadada dhinaceeda haddii aad baabuur kaxaynayso dayrta. In yar oo ka mid ah jardiinooyinkaas geedaha ah ayaa sidoo kale bixiya wax aad iska soo qaadatid. Magaalooyinka ay joogsanayaan waxaa ka mid ah Lithgow, oo ku taal salka buuraha; Bathurst, oo ku taal hoolka gawaarida gawaarida ee Mount Panorama, iyo Orange (3 saacadood oo laga bilaabo Sydney), magaalo qurxan oo qurux badan oo leh jawi weyn (jawi qabow) iyo dhowr makhaayado oo cajiib ah oo ay leeyihiin kuugga caanka ah, oo si dhakhso leh u noqonaya khamri-iyo gobolka cuntada ee New South Wales si uu uga fuulo dooxada Hunter.
Socdaal ilaa aagga cidlada ah ee Buuraha Blue. Waxaa jira dhowr socod maalinle ah oo wanaagsan aagga Katoomba, ama waad tamashleyn kartaa Jenolan Godadka.
Park National Park, koonfurta Sydney oo laga heli karo tareenku wuxuu leeyahay socod fiican 1 ilaa 2 maalmood.
Newnes Glen gudaha Beerta Qaranka ee Wollemi.
Xadiiqada Qaranka ee Kanangra Boyd.
Dalxiis ku samee Khamriyeynta Dooxada Hunter.
Wollongong waa magaalo yar oo qurux badan oo koonfurta ka xigta magaalada Sydney, lagana heli karo iyadoo loo maro koonfurta dhanka A1 / M1 (Princes Hwy) ama raac tareen saacadle ah.
Madaxa ilaa Gosford or Woy Woy xoogaa deggan, laakiin xeebo qurux badan. Labadan magaalo ayaa laga heli karaa Xeebta Dhexe iyo Newcastle tareen.
Madaxa ilaa magaalada gobolka ee Newcastle tareen ku qaadashada qaar ka mid ah dhismooyinka Fiktooriya iyo xeebo magaalo oo cajiib ah.
Ama haddaad ku socoto:
Melbourne - Australiacaasimada dhaqankeeda iyo isboortiga. Sidoo kale fiiri: Sydney ilaa Melbourne baabuur si aad u hesho macluumaadka safarka.
Auckland - Way ka dhowdahay 1,000 km badanaaba waa ka jaban tahay in la tago Auckland marka loo fiiriyo Perth.
Alice Springs - 3,000-km wadista. Ugu yaraan safar 3 habeen ah, oo ku istaaga Hay, Adelaide & Coober Pedy.
Masaajida Maxaliga / Masjidka ee Sydney
Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta ee Sydney
Guryaha Guryaha ee Sydney
Hoteelka Adina Apartment Hotel Chippendale
Hoteelka Adina Apartment Hotel Coogee
Hoteelka Adina Apartment Hotel Sydney Norwest
Adina Apartment Hotel Sydney, Bartamaha
Hoteelka Adina Apartment Hotel Sydney, Crown St.
Adina Apartment Hotel Sydney, Harborside
Guryaha Fulinta ee AEA Bridgeport Sydney
Guryaha Adeegga Dhexe ee AEA Sydney
Madaarka Caalamiga ah ee Sydney
Hotelka Arts Sydney
Astral Tower iyo Deganaanshaha Xiddiga
Avonmore On The Park Boutique Hotel Magaalada Sydney
Saldhigleyda Saldhigga Sydney
Best Galbeedka Ashfield Philip Lodge Motel
Hoteelka ugu wanaagsan Western Plus Hotel Stellar Sydney
Guryaha ugu Wanaagsan Galbeedka Mataanaha ah ee Artarmon
Booqdayaasha Boorsooyinka & Miisaaniyadda Motel Manly
Hoteelka Caalamiga ah ee BreakFree Bankstown
BreakFree On Guryaha George Sydney
Hotel Capitol Square Magaalada Sydney
Guryaha Carrington Sydney City Center
Central Railway Hotel & Guryaha Sydney
Hoteelka Central Station
Hotelka Chifley Eastern Creek
Gaari Hoteelka Central Sydney
Magaalada Hotel Sydney
Hotel Lodge Hotel Sydney
Guryaha raaxada & Suites Burwood
Raaxo Inn Ugaarsiga Liverpool Sydney
Raaxada Inn North Shore Lane Cove
Raaxada Inn West Ryde
Coogee Sands Hotel & Guryo Ku Yaala Xeebta
Barxadda By Marriott North Ryde Hotel
Crowne Plaza Hotel Coogee Xeebta-Sydney
Hoteelka Devere ee Sydney
Hoteel Lagu Quusto
Econo Lodge Sydney Koonfurta
Guryaha Fiori Sydney
Afar Dhibcood By Sheraton Hotel Darling Harbor Sydney
Afar xilli xilli Sydney
Qolalka Fraser Sydney
Beerta Lodge Sydney
Glenferrie Lodge Waqooyiga Sydney
Hoteel Weyn ee Koonfurta
Harbor Rocks Hotel Sydney - Ururinta MGallery
Hoteelka Highfield Sydney
Hoteelka Hilton Sydney
Fasaxa Inn Parramatta
Holiday Inn Madaarka Sydney
Booqdayaasha Guryaha ee Sydney
Hoteelka Ibis Sydney Park Park
Hoteelka Ibis Thornleigh
Ibis Hotel World Square Magaalada Sydney
Hoteelka InterContinental Sydney
Waqtiga firaaqada ee 'Central Sydney'
Liido Suites King Cross
Hoteelka Macleay ee Adeegga Shaqaalaha ee Sydney
Guriyeynta Hoyga ee Manly Oceanside
Hoteelka Mantra 2 Bond Street Sydney
Hoteelka Mantra Chatswood
Hoteelka Mantra Parramatta
Rakaabka Maze ee Sydney
Guryaha Adeegyada ee Madiina Double Bay
Guryaha Adeegyada ee Medina Martin Place
Guryaha Adeegyada ee Medina North Ryde
Madaarka Caalamiga ah ee Mercure Sydney
Huteelka Mercure Sydney Parramatta
Guryaha Metro-ga ee ku yaal Darling Harbor
Hoteelka Metro ee Pitt Sydney
Milner Gardens 3 Qolka jiifka Magaalada Sydney
Napoleon On Kent Guryaha Sydney
Hoteellada Noahs Bondi Beach
Waqooyiga Shore Hotel Sydney
Hoteelka Waqooyiga Sydney Harbourview
Novotel Hotel Rockford Darling Harbor Sydney
Hoteelka Novotel ee Sydney Brighton Beach
Hoteelka Novotel Sydney Manly Pacific
Hoteelka Novotel Sydney Park Park
Novotel Sydney On Darling Harbor Hotel
Hoteelka Novotel Sydney Rooty Hill
Guryaha Oaks Goldsbrough Sydney
Geedaha ku yaal Castlereagh Hotel Sydney
Xarunta Park Regis City Sydney
Guryaha Park Regis Concierge Apartments Sydney
PARKROYAL Darling Harbor, Sydney
Pullman oo ku yaal Sydney Park Park Hotel
Hoteelka Pullman Sydney Hyde Park
Q Station Sydney Harbor National Park Manly Hotel
Tayada Huteelka Tayada ee Narrabeen
Quay West Suites Hotel Sydney
Guryaha Quest Rosehill
Apest Bondi Isgoyska Apartment
Quest Campbelltown Guryo Adeeg
Ku Raadso Guryo Ku Yaala Dixon Darling Harbor
Guryaha Quest World Square Adeegyada Sydney
Regents Guryaha Maxkamada - 8 hudheelo
Guryaha Rendezvous Stafford Apartment Hotel Sydney
Hoteelka Rendezvous Studio Sydney Central
Rydges Hotel Cronulla Xeebta
Hotel Rydges Waqooyiga Sydney
Xilliyo Darling Harbor Sydney
Xilliyo Harbor Plaza Sydney
Sir Stamford At Wareegtada Quay Sydney Hotel
Jiifka Express Motel Chullora
Stamford Grand Hotel Waqooyiga Ryde
Garoonka diyaaradaha ee Stamford Plaza Hotel Sydney
Switzerland Grand Resort & Spa Bondi Beach
Hoteelka Dhexe ee Sydney
Dalxiiska Dalxiiska ee 'Sydney Gateway Resort'
Hoteelka Sydney Harbor Marriott Oo Ku Yaal Wareeg Wareeg ah
Hoteelka Sydney Wattle
Guryaha Atlas ee Adeegyada ee Sydney
Hoteelka Bayswater Sydney
Hoteelka Blenheim Randwick
Hotelka Darling ee Sydney
Hotelka Grace Hotel ee Sydney
Hoteelka Kirketon ee Sydney
Hoteelka Langham ee Sydney (waagii hore Hotelka Observatory)
Hoteelka Menzies Sydney
Hoteelka Sebel Manly Beach Sydney
Hoteelka Sebel Pier One
Degenaanshaha Sebel ee Chatswood
Hoteelka Sebel Surry Hills ee magaalada Sydney
Hoteelka Sydney Boulevard
Hoteelka Westin Sydney
Qolalka York & Deganaanshaha Sydney Waxaa qoray Swiss-Belhotel
Huteelka Travelodge Blacktown
Travelodge Macquarie Waqooyiga Ryde Hotel
Hoteelka Safarka ee Phillip Street
Hoteelka Travelodge Wynyard Sydney
Guryaha Ultimate Bondi Beach Sydney
Hotelka Vibe ee Waqooyiga Sydney
Vulcan Hotel - Darling Harbor Sydney
Waldorf Drummoyne Guryo Adeeg
Guryaha Waldorf Parramatta
Guryaha Waldorf Wahroonga
Waldorf Woolloomooloo Biyaha Guryaha Sydney
Dalxiiska Dalxiiska Wyndham Asia Asia Pacific Sydney
Y Hotel Magaalada Koonfurta Sydney
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Australia > Xalaasha Safarka ee Sydney